အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ သားငယ် ကိုထိန်လင်း နှင့် FNN သတင်းဌာန အင်တာဗျူး(ရုပ်သံ)
Posted by မြတ်လေးငုံ at Saturday, December 11, 2010 Links to this post
ဗိုလ်ချူပ်ရင်သွေးများ (နှစ် ၆၀ က စာမှတ်တမ်း)
(အာရ်အက်ဖ်အေ ရေဒီယိုက တဆင့် မေစာ ပြန်လည်တင်ပြသည်)
ဒီဇင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၀
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ခြောက်ဆယ်နီးပါးက စာပေမှတ်တမ်းတစောင်ကျေးဇူးကြောင့် နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင် တဦးရဲ့ သမိုင်းအစ ခြေရာခံမိခဲ့ပုံကို ပြင်ပကလောင်ရှင် မေစာက (RFA) လွတ်လပ်တဲ့ အာရှအသံ စာဝိုင်း ပေဝိုင်း စကားဝိုင်း အစီအစဉ်မှာ ဆွေးနွေးတင်ပြထားတာကို တဆင့် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ ကွယ်လွန်ပြီး ငါးနှစ်အကြာ၊ တနည်းပြောရရင် လွတ်လပ်ရေးရပြီး လေးနှစ်အကြာမှာ ဗိုလ်ချုပ်တို့ မိသားစုအကြောင်း ဆောင်းပါးတစောင် ၁၉၅၂ ဇန်နဝါရီလထုတ် သွေးသောက်မဂ္ဂဇင်းထဲမှာ ဖော်ပြဖူးပါတယ်။ ရေးသူက “ခရီးသည်အယ်ဒီတာ” ။ ဆောင်းပါးနာမည်က “ဗိုလ်ချုပ်၏ ရင်သွေးများ”တဲ့။ သွေးသောက်မဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာက ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ကျန်ရစ်သူမိသားစု နေထိုင်တဲ့ ရန်ကုန် ကန်တော်ကြီး တာဝါလိန်းလမ်းက အိမ်ကိုသွားပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကတော် ဒေါ်ခင်ကြည်နဲ့ ကလေးသုံးယောက်ကို တွေ့ပါတယ်။ ကလေးတွေနဲ့ စကားပြောဖြစ်ဆိုဖြစ်ပုံကို တင်ပြရင်း ကလေးတွေရဲ့ စရိုက်လက္ခဏာတွေကို မှတ်တမ်းပြုထားပါတယ်။
ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်းက အတွေးပွားကြည်နူးရတဲ့ဆောင်းပါးတစောင်လို့ ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ ၁၉၅၂ခု ကာလက ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ကျန်ရစ်သူရင်သွေးတွေရဲ့ အပြုအမူ အပြောအဆိုကို မြင်ယောင်ကြားယောင်ရင်း ဒီနေ့ နိုင်ငံရေးလောကမှာ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်လို့ အပြောအဆို အသတ်အမှတ်ခံနေရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အပြုအမူ အပြောအဆိုနဲ့ ယှဉ်စရာဖြစ်လာရပါတယ်။ ရှေးရှေးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဒီနေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ မခြားမနားလှပါလား။ အင်ဂလိပ်ကဗျာဆရာကြီး ဝီလျံဝါ့ဒ်စဝါ့သ်ရဲ့ “ကလေးဆိုတာ လူကြီးရဲ့ဖခင်ပဲ”လို့တိုက်ရိုက် ဘာသာပြန်ရမယ့် စာသားကို ပြေးသတိရပါတယ်။ ငယ်ငယ်ကတည်းက ဇာတိပြတတ်တဲ့ လူ့သဘောကို အာရုံ ဝင်စားမိပါတယ်ရှင်။
ဒီဆောင်းပါးရေးစဉ်က ကလေးတွေက တကယ့် ငယ်ငယ်လေးတွေပါ။ အောင်ဆန်းဦးက ၈နှစ်၊ အောင်ဆန်းလင်း က ၇နှစ်၊ အောင်ဆန်းစုကြည်က ၆နှစ်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ စကားပြောပလားဆိုရင် အောင်ဆန်းစုကြည်က သူ့ကိုယ်သူ မမစု မမစု လို့ ရည်ညွှန်းပြီး ပြောတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီစကားဝိုင်းမှာ သူ့အကြောင်းပြောရင် ခရီးသည်အယ်ဒီတာ နည်းတူ မမစုလို့ပဲ သုံးခွင့်ပြုစေချင်ပါတယ်။
မောင်နှမသုံးယောက်မှာ စရိုက်လက္ခဏာတွေက တမျိုးစီ။
ဆောင်းပါးထဲမှာ သားကြီး အောင်ဆန်းဦးက မလှုပ် တလှုပ်ပါ။ မေးတဲ့သူက မေးနိုင်မှ စကားသံထွက်တာပါ။ အဖေနဲ့အမေ ဘယ်သူ့ကိုချစ်သလဲ မေးတဲ့အခါ ဘယ်လိုမှ မဖြေဘဲ ရယ်နေသတဲ့။ ဒါကြောင့် သူ့အမူအရာ သူ့အသံကို များများ မကြားရပါဘူး။
အောင်ဆန်းလင်းကတော့ သွက်သွက်လက်လက်ရှိလှပါတယ်။ ကြံကြံဖန်ဖန်တွေးပြီး ရယ်ရယ်မောမော ပြောတတ်ပါတယ်။ ပြောပုံနေပုံ ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ တူတယ်လို့ ခရီးသည်အယ်ဒီတာက မြင်ပါတယ်။ အဖေနဲ့အမေမှာ သူက အမေထက် အဖေကို ပိုချစ်တဲ့ကလေး။
“ဖေဖေ့ချစ်တယ်၊ ဖေဖေက တခါဘဲရိုက်တယ်” တဲ့။ ရိုက်တာက ရေလုသောက်လို့ ရိုက်တာ။ တခါလေး ရိုက်ဖူးတာပေမယ့် လေးငါးနှစ် ကြာအောင် မှတ်တတ်တဲ့ကလေး။ ပြောပါသေးတယ်။
“ကျနော်တော့ အိမ်ထောင်ရေးကို မကြိုက် ဘူး။ စီးပွားရေးပဲ ကြိုက်တယ်”တဲ့။
အောင်ဆန်းလင်းက အဲဒီလို ပြောတော့ မမစုက သူ့အကိုအကြောင်း သူက သွက်သွက်လက်လက်ရှင်းပြပါတယ်။
“သူကလေ မိန်းမယူရင် ခလေးမွေးရမယ်။ ဒီခလေးကိုကျွေးရတာဟာ ဒုက္ခပဲ တဲ့။ မေမေတောင်မှ မမစုတို့ကို ကျွေးနေရတာ ဒုက္ခများတယ်တဲ့။ ကနွဲ့ကရ ချစ်စရာအမူအရာကလေးနှင့် ရှင်းပြသည်” လို့ အယ်ဒီတာက ကောက်ချက်ချပါတယ်။
အဖေနဲ့အမေ ဘယ်သူ့ကို ချစ်သလဲဆိုတဲ့အမေးကိုဖြေတဲ့အခါ “မမစုကတော့ ဖေဖေ့ရော မေမေ့ရော ချစ်တာဘဲ” တဲ့။ ကြာကြာ အတူ မနေလိုက်ရပေမယ့် အဖေ့အပေါ် မမစုရဲ့အချစ်က ခိုင်လှပါတယ်။
စရိုက်လက္ခဏာတွေမတူသလို ရည်မှန်းချက်တွေက မတူပြန်ပါဘူး။
အရုပ်ဆွဲ အရုပ်လုပ် ဝါသနာပါတဲ့ အောင်ဆန်းဦးကတော့ ကြီးလာရင် အင်ဂျင်နီယာလုပ်ဖို့မှန်းသတဲ့။ အောင်ဆန်းလင်းက စီးပွားရေးဝါသနာပါပါသတဲ့။ မမစုက ဘယ်လိုမှ ထုတ်မပြောပေမယ့် အမျိူးသမီးများတိုးတက်ရေးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ အစိုးရလုပ်ငန်းဘက်ဝင်မယ်လို့ ခရီးသည် အယ်ဒီတာက ဟောကိန်းထုတ်ပါတယ်။
မတူတာတွေရှိသလို မမစုတို့မောင်နှမသုံးယောက်မှာ စရိုက်တူတာတွေလဲ ရှိပါတယ်။
ပထမတူတဲ့အချက်က မြန်မာ့ရိုးရာ ယဉ်ေကျးမှုကို ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း နေထိုင်ခဲ့ကြတာပါ။ စားတဲ့ သောက်တဲ့ အခါ ကြီးသူကို ငယ်သူက ဦးချပြီးမှ စားကြပါသတဲ့။ အကြီးဆုံးသား အောင်ဆန်းဦးပန်းကန်မှာ ထမင်းဟင်း အရင်ထည့်၊ နောက်မှ အောင်ဆန်းလင်းနဲ့ မမစုရဲ့ ပန်းကန်တွေထဲမှာ ကြီးစဉ်ငယ်လိုက် ထည့်ရပါသတဲ့။
ဒုတိယအချက်ကတော့ ဦးစောစံဘိုးသင်းကို ချစ်ခင် ရိုသေကြတဲ့နေရာမှာ ။
ဦးစောစံဘိုးသင်းဆိုတာက ဗိုလ်ချုပ်နဲ့အတူ လက်တွဲခဲ့တဲ့ ဝန်ကြီးဟောင်း ကရင် တိုင်းရင်းသားကြီ:ပါ။ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့မိသားစုအပေါ် သံယောဇဉ်ကြီးလှတဲ့ ဦးစောစံဘိုးသင်းက ဗိုလ်ချုပ်မရှိတဲ့ နောက်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကတော်နဲ့ ကလေးတွေဆီကို မကြာမကြာ အလည်အပတ် ရောက်တတ်ပါတယ်။ ကလေးတွေကို ပုံပြောပြတတ်ပါသတဲ့။ ကလေးတွေကလဲ “ဆင်ကြီး” ရယ်လို့ တရင်းတနှီးခေါ် တတ်ပါသတဲ့။ တိုင်းရင်းသားတွေအပေါ် ချစ်ခင်ရိုသေစိတ်ဟာ အဲဒီအရွယ်ကတည်းက မမစုမှာအမြစ်တွယ်ခဲ့ပြီလို့ ဆိုရင် မလွန်တန်ရာလို့ ယူဆပါတယ်။
တတိယ တူညီကြတဲ့အချက်ကတော့ ဝေဖန်ဆန်းစစ်တတ်တဲ့အကျင့် ရှိခဲ့ကြတာပါပဲ။
နိုင်ငံခြားကလာတဲ့ ကလေးဖတ်စာအုပ်တွေဖတ်ရှုနေကြပေမယ့် အဲဒီအရွယ်ကတည်းက မျက်စိမှိတ် လက်ခံတဲ့ အကျင့်မရှိခဲ့ပါဘူး။ မိဘစကားနားမထောင်တဲ့ ဇာတ်ကောင်တဦးရဲ့ အောင်မြင်မှုကို အသားပေးရေးထားရင် ရှုတ်ချတတ်ပါတယ်။ မိဘစကားနားမထောင်ဘဲ ချမ်းသာသွားတာမျိူး မချမ်းသာချင်ပါဘူးလို့ ဆိုကြပါသတဲ့။
တခါမှာတော့ လူကြီးတွေက မိထွေးမကောင်းကြောင်း စကားလက်ဆုံကျနေကြပါသတဲ့၊ အဲဒီအချိန်မှာ မောင်နှမ ရောက်လာပြီး လူကြီးတွေဝိုင်းထဲမှာ ဝင်ပြောပါသတဲ့။
ပြောပုံက “အံမယ် မိထွေးတိုင်း မဆိုးပါဘူး။ အီဘရာဟင်လင်ကွန်းရဲ့ မိထွေး ဘယ့်နဲ့ လုပ်မလဲ” တဲ့။
ထုံးတမ်းစဉ်လာ အပြောအဆိုပေမယ့် အကြောင်းယုတ်တိမခိုင်မာရင် လက်မခံတတ်တဲ့အမူအရာကို မြင်နေရပါပြီ။
ဗိုလ်ချုပ်ရင်သွေးတွေမှာ တူညီကြတဲ့ နောက်ဆုံးတချက်။ ဒါကို နောက်ဆုံးထား အစီရင်ခံရပေမယ့် အရေးအကြီးဆုံးလို့ ဆိုချင်ပါတယ်။ အရေးအကြီးဆုံးမို့ ခရီးသည်အယ်ဒီတာရဲ့စကားကိုပဲ အလုံးစုံ ကိုးကားဆိုပါရစေ။
“သူတို့သည် လိမ်လည်ပြောခြင်း၊ မိဘစကား နားမထောင်ခြင်းတို့ကို အလွန်မုန်းကြသည်။ ကြောက်စိတ်ကို ပယ်ကြသည်။” တဲ့။
ဒီအထဲက မိဘစကားနားမထောင်တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆိုပြီးသားမို့ အကျယ်မချဲ့တော့ပါဘူး။ လိမ်ပြောတာကို မကြိုက်တဲ့ စရိုက်ဝါသနာနဲ့ ပတ်သက်လို့ဆိုရင်လဲ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိကို ဖတ်ဖူး ကြားဖူးသူများ သိပြီးတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။ အရောင်းအဝယ်လုပ်ရာမှာ အမြတ်များများရလိုတဲ့အတွက် ဝယ်ရင်းဈေးကို ပိုပြောတာကိုတောင် လက်မခံတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့အပြုအမူ အပြောအဆိုကို သတိရမိမှာပါ။ ဗိုလ်ချုပ်ရင်သွေးတွေမှာ ငှက်ပျောပင်စိုက် မိလိုက်ဖပါ ဒီလိုစရိုက်မျိူးရှိလာတာလို့ တွေးနိုင်ပါတယ်။
နောက်တော့ ကြောက်စိတ်ကို ပယ်ကြတဲ့ဗီဇ။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလောကထဲကို ဝင်လာကတည်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆီက များများကြားရတဲ့တရားဟာ ကြောက်စိတ်ဆန့်ကျင်ရေးတရားပါပဲ။ ၁၉၃၃ ခုက အမေရိကန်သမတ ရုစဗဲ့ ဆိုခဲ့သလိုပေါ့။
“လောကမှာ တခုတည်းသော ကြောက်စရာက ကြောက်စိတ်ကြီးပဲ မဟုတ်လား”။
ဒီကြောက်စိတ်ကြောင့် အဖိနှိပ်ခံရ၊ အနှိပ်စက်ခံရ၊ အဓမ္မမှုမှန်သမျှ ခေါင်းငုံ့ခံရတာတွေ မြင်နေကြုံနေရတော့ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒီတရားကို နာနာဟောပါတယ်။ ဟောရုံနဲ့ အားမရသေးဘဲ စာတစောင် ပေတဖွဲ့ ပြုစုပါတယ်။
“ကြောက်ရွံ့ခြင်းမှ ကင်းဝေးရေး” တဲ့။
နောက်ပြီး တရားဆိုတာက သိရုံနဲ့ ဘာထူးမှာတုံး။ သိလဲသိ ရှိလဲရှိမှ။ ဟောလဲဟော ကျင့်လဲကျင့်မှ။ သိတဲ့တရား ဟောတဲ့တရားက တရားအရာ မြောက်တာပါ။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး လောကထဲ ကျင်လည်နေတဲ့ မမစုက မကြောက်တရားကို သိလဲသိ ရှိလဲရှိ၊ ဟောလဲ ဟော။ ကျင့်လဲကျင့်။ ဒီသတ္တိ ဒီစရိုက်ဟာ ငယ်ငယ်တုန်းကတည်းက သတ္တိပါလား၊ စရိုက်ပါလား။
ခရီးသည်အယ်ဒီတာသာ စာနဲ့ပေနဲ့ မှတ်တမ်းမတင်ခဲ့ရင် ခေါင်းဆောင်တဦးရဲ့ သမိုင်းအစကို အခုလို ခြေရာကောက်နိုင်မယ် မဟုတ်ပါဘူး။ နှုတ်တရာ စာတလုံး ဆိုတဲ့အတိုင်း စာပေရဲ့ကျေးဇူးကြီးလှပါကလား လို့ ဆင်ခြင်မိကြောင်းပါရှင်။ ။
ပြည်ပမှ ကျပ် ၃ သိန်းနှင့်အထက် ပစ္စည်းဝယ်ပါက ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိအခွန် ပေးဆောင်ရတော့မည်
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်မှ စတင်ကာ ပြည်ပနိုင်ငံများမှ ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ဝယ်ယူရန်အတွက် စာချုပ်ချုပ်ဆိုပါက ဝယ်ယူသည့်နိုင်ငံမှ အခွန်ကိစ္စပါရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မပါရှိသည်ဖြစ်စေ ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်း အတွက် ပေးချေငွေအပေါ် ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ အခွန် ၃ ဒသမ ၅ရာခိုင်နှုန်း ပေးဆောင်ရမည်ဟု ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာနက ထုတ်ပြန်ကြေညာထားသည်။
အဆိုပါ ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ အခွန် (Withholding Tax) ကို ပြည်ပမှ ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်း၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရန်အတွက် သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း ပြုလုပ်သည့် မည်သည့် ကုမ္ပဏီနှင့်အဖွဲ့အစည်းမဆို ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အခွန်နှစ်ထပ် စည်းကြပ်မှု ရှောင်ရှားရေးသဘောတူ စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသည့် အင်္ဂလန်၊ ဗီယက်နမ်၊ ကိုရီးယား၊ အိန္ဒိယ၊ မလေးရှားနှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံများမှ ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကို ဆောင်ရွက်စေခြင်းဆိုင်ရာ စာချုပ်များ ချုပ်ဆိုမည်ဆိုပါက နိုင်ငံအလိုက် တစ်ဦးချင်းနှင့် ကုမ္ပဏီတို့အပေါ် အခွန်စည်းကြပ်ရာတွင် သဘောတူစာချုပ်အရ သတ်မှတ်ထားသော စံနှုန်းများအတိုင်း ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ၊ ထို့အပြင် ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဝယ်ယူသည့် ပစ္စည်းတန်ဖိုးသည် ကျပ် ၃ သိန်းနှင့် အထက်ဖြစ်မှသာ ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ အခွန်ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပြီးကျပ် ၃ သိန်းအောက် ဖြစ်ပါက အခွန်ကောက်ခံခြင်း မပြုဘဲ ပေးချေးငွေနှင့် စပ်လျဉ်းသော စာရင်းကိုသာ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသို့ ပေးပို့ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ သို့ရာတွင် ကန်ထရိုက်စာချုပ်၊ သဘောတူစာချုပ်၊ သဘောတူညီမှု တစ်ရပ်ရပ်အရ ဝယ်ယူသည့် ပစ္စည်းတန်ဖိုးသို့ မဟုတ်လုပ်ငန်းတန်ဖိုးသည် ကျပ် ၃ သိန်းအထက် ဖြစ်ပါက အလီလီ ပေးချေငွေများကိုလည်း ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ အခွန်အတိုင်းပေးသွင်းရမည် ဖြစ်သည့်အပြင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ပေးချေခြင်းဖြစ်ပါက ပေးချေငွေအားလုံးအပေါ် အခွန်ကောက်ခံသွားမည်ဟု သိရသည်။ ၎င်းအပြင် ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်း ကိစ္စအတွက် L/C ဖွင့်လှစ်ခြင်းကို သက်ဆိုင်ရာဘဏ်များက ပြည်ပမှ ဝယ်ယူသည့်ပစ္စည်းဖိုး ပေးချေငွေအပေါ် ကျသင့်သည့် ငွေမှနုတ်ယူ အခွန်ပေးသွင်းပြီးကြောင်း အထောက်အထား တင်ပြနိုင်မှသာ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးတော့မည်ဟု ထပ်မံသိရကြောင်း Popular News ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
ယနေ့တွင်အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရေးဆွဲခဲ့သောပန်းချီကားများ စတင်ရောင်းချ
အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ် အကျယ်ချုပ် ဖြင့် နေခဲ့ရစဉ် သူကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲခဲ့သော ပန်းချီကားများကို သူမ၏စိတ်ကူးဖြင့် ပုံဖော်ခဲ့သည် ဟုသိရှိရ ပါသည်.။ထိုပန်းချီကား တချပ်လျှင် ခံစားချက် တစ်ခုစီ ရေးဆွဲခဲ့ သည်ဟု၍ လည်းသိရပါသည်၊ ထိုပန်းချီကား များအားသူမကိုယ်တိုင် ကွန်ပြူတာဖြင့်ရေးဆွဲခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါသည်.။
ပို့စ်ကတ်များကို နွေဦး၊ ဆောင်းဦး၊ နွေရာသီ၊ ဆောင်းရာသီ၊ ဇာပန်ထိုး ပညာ၊ ပန်းနုရောင်ပန်းများ၊ အနီရောင်ပန်းများ ဟူ၍အမည်များပေးထားပြီး ပို့စ်ကတ်နောက်ကျောတွင် ပို့စ်ကတ်နှင့် သက်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာများကို သူမနေအိမ် အကျယ်ချုပ် ကျခံနေရစဉ် အတွင်း ရေးဆွဲထားသည် ဆိုသော စာများ ရေးထိုးထားပြီး အောက်တွင် “အောင်ဆန်းစုကြည်” ဟု ရေးထိုး ထားသည်။
ပို့စ်ကတ် တခုလျှင် ကျပ် (၁၀၀၀) တစ်ထောင်ဖြင့် စတင် ရောင်းချမည်ဟုသိရပါသည် ရရှိသောငွေ များကိုနိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား မိသားစုများအား ကူညီရေး၊ HIV/ AIDS ဝေဒနာရှင်များအား စောင့်ရှောက်ရေး စသည့် လူမှုရေးကိစ္စရပ်များ အတွက် အသုံးပြုမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရှိရပါသည်.။၄င်းပို့စ်ကတ်များကို လည်းနေရာ အနှံဖြန့်ချိ ရောင်းချသွားမည်လို့ လည်းသိရှိရပါသည်.။
သတင်း ပေးပို့ ပေးသော သူငယ်ချင်း အားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.။
ယနေ့ အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အမေရိကန် ဒုလက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး တွေ့ဆုံ
အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းရဲ့ တစိတ်တပိုင်းအဖြစ်နဲ့ အင်္ဂါနေ့ကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံကို ၄ ရက်ကြာ တရားဝင်ခရီး ရောက်ရှိနေတဲ့ အရှေ့အာရှနဲ့ ပစိဖိတ်ရေးရာ အမေရိကန် ဒုတိယ လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဂျိုးဆက်ဖ် ယွန်း (Joseph Yun) ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် NLD ခေါင်းဆောင်တွေ၊ CRPP ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြု ကော်မီတီဝင်တွေနဲ့ ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်မှာ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ဂျိုးဆက်ဖ် ယွန်း ဟာ သူ့ခရီးစဉ်ရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့ ဒီကနေ့မှာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။ အပြည့်အစုံကိုတော့ ဆက်သွယ် စုံစမ်းထားတဲ့ ကိုဇော်ဝင်းလှိုင်က တင်ပြထားပါတယ်။
အရှေ့အာရှနဲ့ ပစိဖိတ်ရေးရာ အမေရိကန် ဒုတိယလက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဂျိုးဆက်ဖ် ယွန်း ဟာ ဒီကနေ့ မနက် ၁၀ က မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကြိမ်၊ NLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တကြိမ်၊ နောက် CRPP ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မီတီဝင်တွေနဲ့တကြိမ်၊ စုစုပေါင်း ၃ ကြိမ်ခွဲပြီး သီးခြားစီ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့တာပါ။
အဲဒီလို တွေ့ဆုံကြတဲ့အခါ ဆွေးနွေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာ အသေးစိတ်ကို နှစ်ဖက်စလုံးက ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း မရှိပေမဲ့ ဆွေးနွေးပွဲမှာ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ရအောင် ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ့်အကြောင်း ဂျိုးဆက်ဖ် ယွန်း ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်ကနေ တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ ဆွေးနွေးပွဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာ အကျဉ်းချုပ်ကို NLD ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးအုန်းကြိုင်က ပြောပါတယ်။
“မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး ရရှိဖို့အတွက် ဆက်လက်ပြီးတော့ တိုးမြှင့်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ သူ စီစဉ်ထားတဲ့ အကြောင်းတွေကို ရှင်းပြပါတယ်။ အဲဒီမှာ ဒီဘက်က ဧည့်သည်ဘက်ကလည်း သူဟာ နိုင်ငံရေးပါတီတချို့နဲ့လည်း တွေ့ဆုံပြီး ဖြစ်တဲ့အကြောင်း၊ မနေ့ကလည်း နေပြည်တော်မှာ သက်ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ဖြစ်တဲ့အကြောင်း၊ အဲဒီနောက် အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ သူ့ဘက်က တင်ပြနိုင်တဲ့ အနေအထား အခြေအနေတွေကို ဆွေးနွေးပါတယ်တဲ့။ အဲဒီမှာ အပြန်အလှန်အနေနဲ့ ဖလှယ်ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးလို့ဆိုတဲ့ agenda အောက်မှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား လွတ်မြောက်ရေး ကိစ္စတွေ ပါပါတယ်။ ပြီးတော့ ပါတီတွေရဲ့ တရားဝင်ပေါ့ဗျာ ဆက်လက် ရပ်တည်နေပိုင်ခွင့် ကိစ္စတွေလည်း ပါတယ်။ နောက် sanction ကိစ္စတို့ဘာတို့လည်း ပါတယ်လို့ အကြမ်းမျဉ်း အဲဒီလို သိပါတယ်။”
CRPP အဖွဲ့နဲ့ သီးခြား တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာတော့ ဒုတိယပင်လုံညီလာခံ ကျင်းပရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို CRPP အတွင်းရေးမှူး ဦးအေးသာအောင် ရှင်းလင်းပြခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီလို တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုပြီးတဲ့အခါ ဒုတိယလက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဂျိုးဆက်ဖ် ယွန်း က သူ့ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ အပြင်မှာစောင့်နေကြတဲ့ သတင်းထောက်တွေကို စကား အနည်းငယ် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သူပြောသွားတာကတော့ - “သူ့အနေနဲ့ မြန်မာပြည်ကို လာခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ NLD အပါအ၀င် သက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့ တွေ့ရအောင် လာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်း၊ သူ့အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို အများကြီး သိရှိခဲ့ရတဲ့အကြောင်းနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံကို ပြန်သွားပြီး သူမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိနေစဉ် ၃ ရက်မှာ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့တာတွေကို ပြန်လည် သုံးသပ်ရပါမယ်တဲ့။ နောက် အနာဂတ်မှာ အတူ ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ သူ့အနေနဲ့ မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်း၊” - ပြောသွားတာပါ။
ဒါ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာအောင် အမေရိကန်ဘက်က ကူညီနိုင်မယ့်ကိစ္စတွေကိုလည်း သူ့အနေနဲ့ ဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်း မစ္စတာ ဂျိုးဆက်ဖ် ယွန်း က ဆက်ပြောပါတယ်။
“သူအနေနဲ့ မြန်မာ့အရေးကို ဘယ်လို အခန်းကဏ္ဍက ကူညီနိုင်မယ်ဆိုတာကို လေ့လာပါ့မယ်တဲ့၊ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကလည်း အရမ်းကို ကူညီကြပါတယ်တဲ့၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် လိုအပ်တဲ့ ခြေလှမ်းတွေကို စလှမ်းနိုင်မယ်ဆိုရင် အောင်မြင်မှု ရနိုင်ပါမယ်။” - လို့ ပြောသွားတာပါ။
တခြား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ NLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင်တွေ၊ CRPP အဖွဲ့ဝင်တွေ စတဲ့သူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့ အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေကိုတော့ ဂျိုးဆက်ဖ် ယွန်း က ပြောဆိုသွားခြင်း မရှိပါဘူး။ ဒုတိယလက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဂျိုးဆက်ဖ် ယွန်း ရဲ့ ခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ အမေရိကန်သံရုံးက ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်တဲ့ ကြေညာချက်ထဲမှာတော့ - သူ့ခရီးစဉ်ရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ဟာ အခရာကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ဆက်လက် ဆွေနွေးဖို့၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲလွန် လက်ရှိအနေအထားနဲ့ပတ်သက်ပြီး သာမန် ပြည်သူတွေရဲ့ အမြင်တွေကို သိရှိနိုင်ဖို့အတွက် သူ့အနေနဲ့ အခုလို မြန်မာပြည်ကို လာရောက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒုတိယလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဂျိုးဆက်ဖ် ယွန်း ဟာ မြန်မာအစိုးရ၊ လူနည်းစု လူမျိုးစုဝင်တွေ၊ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ဒီမိုကရေစီ လိုလားသော ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တိုက်ရိုက် တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်လို့လည်း အဲဒီ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
မစ္စတာ ဂျိုးဆက်ဖ် ယွန်း ဟာ နေပြည်တော်ကိုသွားပြီး စစ်အစိုးရ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်းနဲ့ ရဲချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ခင်ရီ အပါအ၀င် တခြား စစ်အစိုးရ အရာရှိတွေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် မေလတုန်းကတော့ အရှေ့အာရှနဲ့ ပစိဖိတ်ရေးရာ လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Kurt Campbell မြန်မာနိုင်ငံကို သွားရောက်ပြီး မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် စစ်အစိုးရ အရာရှိတွေနဲ့ တွေဆုံခဲ့ပါတယ်။
အခုလာတဲ့ ဒုတိယ လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဂျိုးဆက်ဖ် ယွန်း ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်က လွတ်မြောက်ပြီး ရောက်လာတဲ့ ပထမဆုံး အဆင့်မြင့် အမေရိကန်အရာရှိဖြစ်ပါတယ်။
မစ္စတာ ဂျိုးဆက်ဖ် ယွန်း ဟာ ဒီကနေ့ညနေမှာ ရန်ကုန်ကနေ ပြန်လည် ထွက်ခွာမယ်လို့ သိရပါတယ်။
အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အားမိသားစုဆရာဝန် ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းက ကျန်းမာရေးအတွက် အနားယူးဘို့ တိုက်တွန်းပြောဆို
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက် ဒီကနေ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးနဲ့ ဂျာမနီနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးတို့ကို နေအိမ်မှာ လက်ခံ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ ပါတီပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောပါတယ်။
“ဂျာမနီ သံအမတ်ကြီးနဲ့ တွေ့နေတယ်။ တွေ့နေတာ နာရီဝက် တနာရီလောက် ရှိသွားပြီ။ အဲ နေ့ခင်းပိုင်းတုန်းက ကိုရီးယား သံအမတ်ကြီးနဲ့ တွေ့တယ်။ ဒီမှာပဲ။,
ဂျာမန်သံအမတ်ကြီး Mr Julius Georg Luy နဲ့ တွေ့ဆုံရာမှာ ဂျာမနီအစိုးရ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက အရာရှိတဦးလည်း ပါဝင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီကနေ့ သံအမတ်ကြီးတွေနဲ့ ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာ အသေးစိတ်ကိုတော့ မသိရသေးပါဘူး။
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ မနက်ဖြန်မှာတော့ အာရှနဲ့ ပစိတ်ဒေသ ဆိုင်ရာ အမေရိကန် ဒုတိယလက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဂျိုဇက် ယွန်နဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ ရှိပါတယ်။
ဒီအတောအတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့ မိမိရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် အချိန်ပေးပြီး အနားယူသင့်တယ်လို့ မိသားစုဆရာဝန်တဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာတင်မျိုဝင်းက တိုက်တွန်း အကြံပြုခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ ဒီကနေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သွားရောက် တွေ့ဆုံပြီး ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာတင်မျိုဝင်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ကောင်းမွန်ကြောင်း ဒါပေမဲ့ အနားယူဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ မြင်မိကြောင်း RFA ကို ပြောပါတယ်။
“အပြင်ပန်းအားဖြင့် ကျန်းမာရေး ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အနားယူဖို့တော့ လိုတာပေါ့နော်။ စိုက်ပြီး လုပ်တဲ့အချိန်က နည်းတာမှမဟုတ်ပဲ။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့လေ၊ ကျွန်တော်က အနားယူဖို့အတွက်တော့ အဓိက တိုက်တွန်းခဲ့တာပေါ့။ အဲဒီလောက်ပါပဲ။ ထူးထူးခြားခြား အကြောင်းအရာတော့ ဘာမှ မရှိပါဘူး။ အဖျားသွေးလေးတော့ နည်းနည်း ရှိတယ်လေ၊ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ပါ။,
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်က လွတ်မြောက်လာတဲ့ နောက်တနေ့မှာ ဗဟန်းမြို့ရွှေဂုံတိုင်လမ်းက အဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာ လူထုကို ပထမဆုံး မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်း နေ့စဉ်လိုလို ပြည်တွင်းပြည်ပက သတင်းထောက်တွေ နိုင်ငံခြား တိုင်းပြည်တွေက ခေါင်းဆောင်တွေ သံတမန်တွေ နိုင်ငံရေးပါတီတွေသာမက လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ တွေ့ဆုံတာတွေ ရှိခဲ့သလို အခြား လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်း ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သွားရောက်တာတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် အနားယူချိန် မရှိသလောက် လုပ်ဆောင်နေတာကြောင့် သူ့ရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် အခုလို တိုက်တွန်းရတာဖြစ်ကြောင်း ဒေါက်တာ တင်မျိုးဝင်းက ပြောပါတယ်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Friday, December 10, 2010 Links to this post
မြန်မာနျူကလီယား တည်ဆောက်ရေး မြောက် ကိုရီယား ကူညီနေကြောင်း ၀ီကီလိခ်စ် ဖွင့်ချ
ရန်ကုန် အနောက်မြောက်ဖက် မိုင် ၃၀၀ ကျော် (ကီလိုမီတာ ၄၈၀) ဝေးသော တောင်ခြေနေရာများတွင် မြေအောက် နျူကလီးယားဒုံးကျဉ်တည်ဆောက်မှု အထောက် အထားများ မြင်တွေ့ရကြောင်း ၀ီကီလိခ်စ်မှဖြန့်ချ သော အမေရိကန် သံရုံး လျှို့ဝှက်ကေဘယ်များတွင် ဖော်ပြထားသည်။
တောင်ကုန်းထိပ်မှ အောက် ပေ၅၀၀ ခန့်အနက် မြေအောက်တွင် အခိုင်အမာတည်ဆောက်မှုများရှိနေကြောင်း၊ မြန်မာ အလုပ်သမားများကို မြောက်ကိုရီး အယောက် ၃၀၀ မှ ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးနေကြောင်း ပါရှိသည်။
အမည်မဖော်လိုသော မြန်မာ အရာရှိတစ်ဦးက ဩစတြေးလျသံအမတ်ကို ပြောကြားချက်ဖြစ်သည့် ‘မြန်မာ အစိုးရအနေဖြင့် နျူကလီးယား တည်ဆောက်မှုတွင် ရုရှားကို software ထရိန်နင်ပေးခြင်းကိုသာ အားကိုး အားထားပြုကြောင်း၊ ရုရှားက စီးပွားရေးဆန်ဆန်ပုံစံ ဆက်ဆံနေသဖြင့် သိပ်တိုးတက်မှုမရှိကြောင်း၊ မြန်မာ အစိုးရက တောင်းသလောက် မပေး နိုင်ကြောင်း ပါရှိသည်။ ထို့ကြောင့် hardware လုပ်ငန်း အကောင်အထည် ဖော်မှုများအတွက် မြောက်ကိုရီးယားနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေကြောင်း’ ဆိုသော သတင်းကိုလည်း အမေရိကန်သံရုံးကေဘယ်တွင် ပါရှိသည်။
ပိုပြီး ထ်ိတ်လန့်ဖွယ်ကောင်းလွန်းသည်မှာ မြန်မာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက ရန်ကုန်ရှိ အမေရိကန်သံရုံးကို ယူရေနီယံ လာရောင်းလို့ သံရုံးမှ ၀ယ်ထားလိုက်ရကြောင်းပါရှိသည်။ ထိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်က ၁၉၉၂ ခုနှစ် တရုတ် တက္ကသိုလ် တစ်ခုမှ စမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီး ရေဒီယို သတ္တိကြွ ပေါင်ဒါဖြစ်ကြောင်း သက်သေအထောက်အထား ပါရှိတဲ့ ကော်ပီလက်မှတ် (photocopied certificate ) ဖြင့် ပုလင်းငယ် တစ်လုံးထဲထည့်ပြီး သယ်ယူလာခြင်း ဖြစ်သည်။ သူက “ခင်ဗျားတို့ အမေရိကန်သံရုံးက ယူရေနီယံဝယ်ယူဖို့ စိတ်မ၀င်စားရင် ထိုင်းဖြစ်ဖြစ် အခြားနိုင်ငံတွေဖြစ်ဖြစ် ရောင်းပစ်ဖို့ ကြိုးစားမှာ” ဟု ပြောကြားကြောင်း ပါရှိသည်။
ရန်ကုန်ရောက် အမေရိကန်အရာရှိ အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့မည်
ဝေါ်လေတိုက်ပွဲ ဆက်ဖြစ်ပွား နအဖ ၇ဦး ကျဆုံး
ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာလကတည်းက အဆိုပါ ဝေါ်လေဒေသတွင် နယ်မြေခံ ဒီကေဘီအေတပ်များကို နအဖတပ်များက အင်အား အလုံးအရင်းဖြင့် ၀င်ရောက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ရွာသူရွာသား ၃၀၀ကျော်မှာ ထိုင်းဘက်ခြမ်းသို့ ထွက်ပြေးလာခဲ့ရာ ယမန်နေ့ည တိုက်ပွဲကြောင့် ယခုဆိုလျှင် ဝေါ်လေကျေးရွာမှ ရွာသူရွာသား ၂,၀၀၀ကျော် ထိုင်းဘက်ခြမ်းကို ထွက်ပြေးရောက်ရှိနေပြီး ဖြစ် သည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ရဲ့ အနာဂတ်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဒုက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦး နဲ့ VOA အင်တာဗျူး
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်လာတယ် ဆိုတဲ့အခါ အဖွဲ့ချုပ်အတွက် သိပ် အားတက်စရာဖြစ်ပါတယ်။ နောက် အဖွဲ့ချုပ်ကို ထောက်ခံတဲ့လူတွေ ဒီမိုကရေစီ လိုလားတဲ့လူတွေကလည်း အင်မတန် အားတက် ဝမ်းသာ ဖြစ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလို စိတ်ဓါတ်ရေးရာ အရှ့အားတက်စရာ ဖြစ်လာတဲ့အပြင် လက်တွေ့ နိုင်ငံရေးအားဖြင့်ရော ဘယ်လိုများ တိုးတက်ပြီးတော့ လုပ်ဆောင်နိုင်မယ့် အခွင့်အလမ်း တွေ့ရပါသလဲ။
ဦးတင်ဦး ။ ။ အများကြီး တိုးတက်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဆောင်ရွက်နေတာထက်စာရင် သူရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်က အင်မတန် ကြီးမားပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာရော ပြည်ပမှာရော သူရဲ့နိုင်ငံရေးရုပ်လွှာ၊ ရုပ်ထု၊ ဥပဓိရုပ်ဟာ အင်မတန် ကြီးမားလာပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒီမိုကရေစီအရေး၊ လွတ်လပ်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီလူ့အခွင့်အရေး ရုပ်ပုံလွှာ အင်မတန် ကြီးမားလာပါတယ်။ သူဒီလို စပြီး ၈၈ ခုနှစ် ပါဝင်တုန်းကတော့ ပြည်သူလူထုတွေ ကြားထဲမှာတော့ သူဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း သမီးတယောက်အနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုက ပါလာတယ် ဆိုတဲ့ သဘောကြောင့်သာလျှင် ကျနော်တို့ ဝမ်းပမ်းတသာ တွေ့ကြပြုကြနဲ့ ကြိုဆိုကြတယ်။
ဒါပေမယ့်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေက သူရဲ့အသက်ကို စွန့်ပြီးတော့ အန္တရာယ်ကြီးမားစွာကို ရင်ဆိုင်ပြီးတော့ သူရဲ့ကိုယ်ကျိုး လုံးဝစွန့်ပြီးတော့ သူ့အဖေ တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ နိုင်ငံတော်၊ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီးကို ပြန်ပြီးတော့ သမိုင်းပေး တာဝန်အရှ့ထမ်းဆောင်ရမယ် ဆိုပြီးတော့ ဆက်လုပ်လာတာကိုက ပြည်သူလူထု တရပ်လုံးက မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့ရတဲ့အခါမှာ အရင်ကြိုဆိုသလို မဟုတ်တော့ဘူး။ လူငယ်အများစုဟာ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ပါလာပြီးတော့ သူကို အမေ လို့ ခေါ်ကြတဲ့အထိ ယုံကြည် ကိုးစားပြီးတော့ အားကိုးလာတာတွေကို တခဲနက်ပြသလာတာဟာ ထင်ရှားလာပါတယ်။ လွတ်လာတဲ့ နောက်ပိုင်း အင်မတန် အံ့သြဖို့ကောင်းတာတွေက ဒီအနားမှာရှိတဲ့ ပဲခူးတို့၊ အင်တိုင်းတို့ စတဲ့ နေရာတွေမှာရှိတဲ့ တပ်မတော်သားတွေထဲက တချို့ မိသားစုတွေကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အိမ်ရှေ့ကို လာပြီး တခဲနက် ကြိုဆိုတာကို ထောက်ရှုခြင်းအားဖြင့် တပ်မတော်သားပိုင်းမှာလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အမေ လို့ ယုံကြည်လာပြီးတော့ တခါတည်း အားကိုးတကြီးနဲ့ ဖြစ်လာတဲ့ဟာက ပိုပိုပြီး ထင်ရှားလာတာကို တွေ့နေရပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ခေါင်းဆောင်အင်္ဂါရပ်လည်း ပိုမိုပေါ်လွှင်လာတယ်၊ ပြည့်စုံလာတယ်။ ပြည်သူကလည်း အားတက်ထောက်ခံမှုတွေ အများကြီးပေးလာကြတယ်ဆိုတော့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာ အခုလောလောဆယ်မှာတော့ လူ့သားချင်းစာနာထောက်ပံ့တဲ့ လုပ်ငန်းတွေ များသောအားဖြင့် လုပ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း ဒီလုပ်ငန်းတွေကို အဓိကလုပ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ပုံမှန်နိုင်ငံရေး လမ်းကြောင်းပေါ်ကို ပြန်တက်နိုင်မယ့် အလားအလာ ရှိပါသလား။
ဦးတင်ဦး ။ ။ သိပ်ရှိတာပေါ့။ ပြည်သူလူထုက ကျနော်တို့ တပ်ထဲမှာ ၂ နှစ်လောက် caretaker government အာဏာယူပြီးတော့ လုပ်တာတောင်မှ ပြည်သူလူထုတွေရဲ့စိတ်ဓါတ်တွေဟာ နောက်ပိုင်း ချုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ ဒီတပ်မတော်သားတွေရဲ့အပိုင်းပိုင်းတွေမှာ စိုးမိုးမှုတွေ၊ လွှမ်းမိုးမှုတွေ၊ အာဏာထူထောင်မှုတွေ၊ နောက်ပြီးတော့ လက်နက်အားကိုးမှုကိစ္စတွေက အဲဒီတုန်းက အပြအသ လေးတွေဖြစ်လာတာ ရှိပြီးတော့၊ ကျနော်တို့ ၁၉၆၀ ခု ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်သူလူထုက တခဲနက် ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကို ရွေးလိုက်ပြီပဲဗျ အဲဒီတုန်းက ဦးနုက တခဲနက် မဲရသွားတာပဲ။ ပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်ဓါတ်က လွတ်လပ်မှုနဲ့ ဒီမိုကရေစီနဲ့ ပတ်သက်လို့ တကယ်လိုချင်တဲ့စိတ် အမှန်ရှိနေပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင် လွတ်လပ်ရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး နဲ့ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ပတ်သက်တာကို ဆောင်ကျဉ်းနိုင်မယ့် အစိုးရတရပ်ကို မြန်မြန်ပေါ်ထွန်းလာအောင် ဖြစ်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒဟာ ကြီးမားနေပါတယ်။
တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးကလည်း အလားတူ သူတို့ဘဝနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာ ဒီအခြေအနေမှာ ပိုပြီးတော့ကာ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်၊ သူတို့ရဲ့တန်တူရည်တူရရေး ဆိုတာတွေကိုလည်း တခဲနက် တောင့်တလာတာဟာ ပြင်းထန်ပြီးတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်မှာ ယုံကြည်ကိုးစားမှုတွေ ပိုမိုပြီး ပြင်းထန် ထက်မြက်လာတယ်ဆိုတဲ့ အရိပ်အမြွတ်တွေက ထင်ရှားလာတယ်အတွက် ဒါကြောင့်မို့ ကျနော်တို့ဟာ အေးအေးချမ်းချမ်း၊ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ တွေ့ဆုံဖြေရှင်း အဖြေရှာပြီး လုပ်ကိုင်သွားရင် ဒီထွက်ပေါက်ဟာ အကောင်းဆုံးလမ်းပေါက် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ တဖြည်းဖြည်း ထင်ရှားလာပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ဟုတ်ပါတယ်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဘက်က ဦးတင်ဦး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့က တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး လမ်းကြောင်းကို ပြောနေပေမယ့် လက်ရှိ အာဏာရှ့စစ်အစိုးရကတော့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရေးကိစ္စကို လုံးဝမပြောဘဲနဲ့ သူတို့ စိတ်တိုင်းကြ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပြီးတော့ သူတို့လမ်းစဉ်အတိုင်း သူတို့သွားဖို့ ဆိုတာကို ထပ်ခါတလဲလဲ ပြောနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီနှစ်ခုက တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး လမ်းကြောင်း ဖြစ်နိုင်မယ့် အလားအလာ ဘယ်လောက်ရှိပါသလဲ။
ဦးတင်ဦး ။ ။ အခြေအနေ အခုနေအတိုင်းမှာတော့ ဦးကျော်ဇံသာတို့ မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ သူတို့ကလည်း လမ်းစဉ် (၇) ချက်ချပြီးတော့ road map (၇) ချက်နဲ့ သွားနေတာကတော့ သူတို့အစီအစဉ်အတိုင်း သွားနေတာကတော့ မှန်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း အဖြေကို ရောက်လာနိုင်ဖို့ဆိုတာကတော့ဖြစ်ရင် ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ မပါနိုင်တဲ့ လူတွေ၊ ရွေးကောက်ပွဲကို ပါဝင်ခွင့် မရတဲ့လူတွေ၊ နောက်ပြီးတော့ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ ရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဆန္ဒဟာ တဖြည်းတဖြည်း အေးချမ်းငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ ပြသ ဖော်ထုတ်လာခြင်းအားဖြင့်လည်း တဖြည်းဖြည်း ဆွေးနွေးတဲ့ စားပွဲဝိုင်းပေါ်ကို ရောက်လာပြီးတော့ ဆွေးနွေး အဖြေရှာလာနိုင်မယ်ဆိုတာကို ကျနော်တို့က ယုံကြည်ပါတယ်။
အခုလည်းပဲ ရွေးကောက်ပွဲပြီးတယ် ဆိုရင် လွှတ်တော်ဟာ ရက် (၉၀) ဆိုတော့ - ရက် (၉၀) တောင် စောင့်ချင်မှစောင့်မှာ။ ဆိုလိုတာက အခု လိုက်ပြီးတော့ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ညှိတာတွေ၊ ပြုတာတွေ။ နောက်ပြီးတော့ သူတိုလည်း ထိုက်သင့်အားလျှော်စွာ သူတို့နည်းသူတို့ဟန်နဲ့ စည်းရုံးတာတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူတို့ နည်းနည်းလေး အသားလေးနည်းနည်း ကျလာရင်တော့ ရက်ပေါင်း (၉၀) မတိုင်ခင်မှာ လွှတ်တော်လည်း ခေါ်ချင်ရင်ခေါ်မှာ။ သို့သော် လွှတ်တော်ခေါ်ပြီးတဲ့အခါမှာ နိုင်ငံတော်အစိုးရှ့ဖွဲ့စည်းရေး အခင်းအကျင်းနဲ့ သူတို့လုပ်ပိုင်ခွင့် ဘယ်လောက်အထိ ပေးမလဲ ဆိုတဲ့အပေါ်မှာ မူတည်တယ်။ သူတို့က တကယ် ဒီမိုကရေစီကို ယုံကြည်တယ် ဆိုပြီးတော့ တကယ်တမ်း ဖြစ်လာရင် ကျနော်တို့ကလည်း တကယ် ဒီမိုကရေစီကို ယုံကြည်တဲ့လူတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီနေရာမှာ တူညီတဲ့မူပေါ်မှာ အဖြေရှာမယ် ဆိုရင် ရနိုင်စရာရှိတယ်လို့ ကျနော်ကတော့ မြင်ပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ဒီမိုကရေစီကို ယုံကြည်တယ် ဆိုတာကတော့ ပြည်သူ ဘယ်သူကမှ သံသယ မရှိကြပါဘူး။ ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားတွေလည်း သံသယ မရှိကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို လက်ရှိ အုပ်စိုးနေတဲ့ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းက ဒီမိုကရေစီကို ယုံကြည်တယ်ဆိုတာကတော့ လူတိုင်း သံသယ ရှိနေကြပါတယ်။ ဆိုတော့ လက်ရှိခေါင်းဆောင်တွေ လက်ထက်မှာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးက ဒီမိုကရေစီ လိုလားသူအချင်းချင်းသာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး အလားအလာရှိတယ်ဆိုတော့။ လွှတ်တော်ခေါ်ပြီးတော့ ဖွဲ့စည်းလာတဲ့ အစိုးရမှာ ဘယ်လောက်လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိလာမယ်၊ သူတို့နဲ့ လက်တွဲပြီးတော့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က လုပ်နိုင်၊ ဆွေးနွေးနိုင်မယ့် အလားအလာ ရှိပါသလား။
ဦးတင်ဦး ။ ။ အခု ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေကတော့ ဦးကျော်ဇံသာ သိတဲ့အတိုင်းပဲ ဒီမိုကရေစီဘက်ကို အရိပ်အရောင်ပြတဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေထဲမှ မဟုတ်ဘဲ။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်တာ အားလုံးကလည်း သူတို့ ဒီအပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ လုပ်လာမယ်၊ ပြုလာမယ့် ကိစ္စရပ်တွေမှာ လုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် ပိုမိုပြီးတော့ ထူးခြားလာမယ့်ဟာ ရှိလာအုံးမယ်လို့ မထင်ဘူး။ အခုန ဦးကျော်ဇံသာ ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ ဒီဟာကတော့ တခေတ်ကလေး one term လောက် သွားချင်လည်း သွားမလား မသိဘူးလား မသိဘူး မပြောတက်ဘူးပေါ့။ သို့သော်လည်းပဲ အခု အခင်းအကျင်းကတော့ လက်မပဲ ဘယ်လောက်ထောင်ထောင်၊ ဘယ်လောက်ပဲလုပ်လုပ် လွတ်လပ်တဲ့ အခင်းအကျင်းကတော့ ပုံစံမမှန်ဘူး။ မမှန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် အဲဒီခေတ်အခါမှာ အခြေအနေဟာ တမျိုးတမည်တော့ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်စရာ ရှိတယ်လို့လည်း ကျနော်တို့က တွက်ဆထားတာရှိတယ်။
အဲဒါကြောင့်မို့လို့ ဒီအပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ အင်အားစုတွေအနေက ယခုထက်ထိ ရှိခဲ့တဲ့ အင်အားစုတွေအတိုင်းပဲ ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် သိပ်သိပ်သည်းသည်းနဲ့ ပိုပြီးစည်းရုံးနိုင်အောင် လုပ်ထားမယ်။ အခြားအခြားရှိတဲ့ အင်အားစုတွေ၊ တိုင်းရင်းသား အင်အားစုတွေ ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် ကျနော်တို့ဘာသာ လုပ်ထားမယ်။ အဲဒီလောက် လုပ်နိုင်ဖို့ ကျနော်တို့က လုပ်ငန်းနဲ့ ပြမယ်ပေါ့။ လုပ်ငန်းနဲ့ပြမယ်ဆိုတော့ အခုတော့ လူမှုရေး ဘာညာခေါ်နေပေမယ့် တကယ်တော့ ဒါဟာ နိုင်ငံရေး။ လုပ်ငန်းနဲ့ ပြတဲ့အပိုင်းမှာ ဥပမာဆိုရင် တိုင်းသူပြည်သားတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဂီရိ လို ဟာမျိုး ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေအနေနဲ့ တက်နိုင်သမျှ ပြည်သူလူထုနဲ့ အနီးကပ်ဆုံး လုပ်နိုင်တဲ့ ဟာမျိုးကို ထိထိရောက်ရောက် စွမ်းပကားရှိသလောက် လုပ်ပြတာမျိုးတွေ လုပ်ပြမယ်။ အလားတူပဲ တခြား လူမှုရေး အထောက်အပံ့ဖြစ်တဲ့ ကိစ္စအရပ်ရပ်တွေ၊ တခြား ကျနော်တို့ ဆောင်ရွက်စရာရှိတဲ့ လူမှုရေးကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး စသဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကတော့ အမြင်နဲ့ ပတ်သက်လို့ အင်မတန် ကျယ်ပါတယ်။
အဲဒါတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ပြည်သူလူထုထဲမှာ ကျနော်တို့ ဝင်ပြီး ရပ်တည်ပြီးတော့ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအားဖြင့် ပြည်သူလူထု ပိုပိုပြီးတော့ လုပ်ကိုင်ပေးနိုင်တယ့် ပုံတွေ ပေါ်လာတာကို မြင်ရင်ဖြစ်ရင်တော့ဖြင့် ဒီအင်အားစုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆက်လက်ပြီး ရှေ့သွားခြင်းအားဖြင့် တိုင်းပြည်အတွက် အကျိုးရှိရာရှိကြောင်း ဖြစ်လာမှာပဲလို့ ယုံကြည်လာတဲ့ အချိန်ရောက်ရင်တော့ အဲဒါဆိုရင်တော့ စားပွဲဝိုင်းကို ရောက်လာနိုင်တဲ့ အကြောင်း ရှိတယ်ပေါ့။ သို့သော်လည်း လက်ရှိ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများအနေနဲ့ကတော့ ဒီလို အမြင်မျိုးကို ရရှိနိုင်အုံးမယ်လို့ မထင်သေးပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ - နောက်တခု တချက်ကလည်း ဒီလိုဗျ သူတို့ စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင့်ကြတဲ့ဟာကိုလည်း ကျနော်တို့က ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ မကြောက်ရအောင်၊ မကျရအောင် နည်းနည်းပြရမယ်။ ပြုရမယ့် သဘောလည်း ရှိတယ်။ ဆိုပါတော့ သူတို့ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင် ဆက်လက်ပြီးတော့ အရေးယူခံရမလား။ နောက်ပြီးတော့ ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ စီးပွားရေး ပတ်သက်တာတွေကို သူတို့ ထိပါးမလား။
အဲဒါတွေနဲ့ ပတ်သက်တာတွေကို ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးတော့ ပြည်သူလူထုပိုင်းကလည်း ထိုက်သင့်အားလျှော်စွာ ကျနော်တို့ အာမခံချက်မျိုးရှိလို့ ယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့ အချိန်မျိုး ဖြစ်ရင်လည်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နီးစပ်လာနိုင်စရာအကြောင်းတွေ ရှိလာနိုင်မယ်လို့ ကျနော်တို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးကိစ္စအဝဝ အရာရာကို ဒီလိုပဲ အင်အားနဲ့ လက်နက်နဲ့ သုံးပြီးတော့ ဖြေရှင်းတာဟာ နှစ်ပေါင်းလည်း (၆၀) ကျော်လာပါပြီ။ ကျနော်တို့လည်း ငယ်ငယ်က ကြီးလာတာ တောက်လျှောက်ပဲ ဘယ်သောအခါမှ အောင်မြင်တယ်၊ ပြီးဆုံးသွားတယ် မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ စောစောက ဦးတင်ဦး ပြောတဲ့အထဲမှာ ပြည်သူဘက်ကလည်း ခွင့်လွှတ်မယ်၊ သူတို့က သူတို့လုပ်ထားတဲ့ ကိစ္စအတွက် အရေးယူခံရမှာ စိုးရိမ်တဲ့အပိုင်းလည်း ရှိတယ်ဆိုလို့ တခုမေးချင်ပါတယ်။ ဒီပဲယင်းကိစ္စ။ ဒီပဲယင်းကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ အခုအခါမှာ အဓိက ခံခဲ့ရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးစလုံးလည်း လွတ်မြောက်လာပြီ ဆိုတော့ တချို့  အမှန်တရား ဖော်ထုတ်ဖို့။ ဒီပဲယင်း ကိစ္စကို လုံးဝ သင်ပုန်းချေပြီးတော့ ခွင့်လွှတ်လိုက်မယ့် သဘောလား။ အမှန်တရား ဖော်ထုတ်ဖို့ အစီအစဉ်များ ရှိပါသလား။
ဦးတင်ဦး ။ ။ ဒီလိုဗျ။ အမှန်ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့မူထဲမှာ၊ ခေါင်းထဲမှာကတော့ ကျနော် သေချာသိပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခေါ်တွေ့တဲ့အခါမှာ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အားလုံးကို ချေလိုက်ပြီ။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ အားလုံးကို ဘယ်သူမှ သဘောမထားဘူး။ တကယ် စိတ်ရင်း အမှန်နဲ့ ပြောတာ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောတဲ့စကားက ကျမဟာ ကျမတို့ဘက်က သေတဲ့လူ၊ ခံရတဲ့လူတွေကို ကျေနပ်အောင် ကျမအခုလို သဘောထားတာကို ကျေနပ်အောင် ပြောရရင် ကျမပင် အန္တရာယ် ရှိပါတယ်။ သို့သော် အန္တရာယ်ရှိပေမယ့်လည်း ဒါကို ဖြစ်မြောက်အောင် လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ သဘောထား ရှိတယ်ဗျ။ အဲဒါကတော့ သေချာပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ နောက်ဆုံး မေးချင်တဲ့တခုက အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့နောင်ရေး။ မြန်မာနိုင်ငံ အာဏာပိုင်တွေက တရားမဝင်တော့ဘူးလို့ ပြောထားတယ်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပြန်လည် ရပ်တည်ခွင့်ရှိဖို့ ဥပဒေနည်းအရှ့ကိုးစားနေတယ်ဆိုတာကို သိရပါတယ်။ ဥပဒေနည်းအရှ့နဲ့ နိုင်ငံရေးအရှ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ရှင်သန်နိုင်မယ့် အခြေအနေအလားအလာ ဘယ်လောက်ရှိပါသလဲ။
ဦးတင်ဦး ။ ။ ရှိတာပေါ့။ ကျနော်ပြောမယ် နောက်ဆုံးတင်ထားတဲ့ ကိစ္စအဝဝကလည်း ပယ်တာပဲ။ ပယ်မှာပဲ။ အဲဒီလောက်အထိ ကျနော်တို့ တွက်ထားပြီးတော့ မှတ်တမ်းမှတ်ရာ အနေနဲ့ ကျနော်တို့ဘက်က ဘယ်လောက်အထိ ဥပဒေနဲ့အညီ ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ် ဆိုတာကို ကျနော်တို့ ပြသသွားခဲ့ပါပြီ။ ကျနော်တို့ အဖွဲ့အစည်းက ရပ်တည်နေတာပဲ။ ကျနော်တို့ရဲ့အန်အယ်လ်ဒီ identity ရှိတယ်ဆိုတာပဲ ကျနော်တို့ ရပ်တည်နေတာပဲ။ အဲဒီတော့ ဘယ်သူ ဘာပြောပြော ရပ်တည်နေမှာပဲ။ အဲဒီတော့ အဖွဲ့အစည်းဆိုတာ ရှိတယ်။ ဒီလို သွားရမှာပဲ။ တခုတော့ရှိတယ် အလံတို့၊ ဆိုင်းဘုတ်တို့၊ ရုံးတို့ ရှိချင်မှ ရှိမယ်။
ဒါပေမဲ့လို့ ရှိခြင်းလည်း ရှိသွားနိုင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ အခြေအနေ ကြည့်ရတာကတော့ ဒီနေ့ အဖွဲ့ချုပ်ကို သူတို့ ပျက်ပြယ်ပြီးလည်း ပြောတယ်။ ဖျက်သိမ်းပြီးပြီလို့လည်း ပြောတယ်။ ဖျက်သိမ်းပြီးပြီဆိုတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ အခု ကျနော်တို့ကို ဆက်ဆံတဲ့ အနေအထားက အရင်ဆက်ဆံတာထက်တောင် လျော့ပါးတဲ့သဘော ရှိတယ်။ လျော့ပါးတဲ့ဆိုတာ လုံခြုံရေးပြောတာ။ လုံခြုံရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ လိုက်ပြီးတော့ လုပ်တာပြုတဲ့ အနှောက်အယှက်က အရင်ကထက်စာရင် နည်းနည်း ပါးတယ်။ အဲဒီ သဘောလေးတွေ တွေ့ရတယ်။ တခုတော့ရှိတယ်။ သိပ်ပြီးတော့ အချိုလိုက်နေပြီး နောက်မှ ပိတ်လုပ်လိုက်လေမလား။ ဒါကိုတော့ ကျနော်တို့လည်း တွက်ထားတာပေ့ါ။ ဘယ်လောက်ပဲ ပိတ်လုပ်လုပ် ကျနော်တို့အနေနဲ့ ပြည်သူလူထုထဲမှာ ရှိနေမယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အခု လွတ်လာတဲ့အချိန်မှာ အားလုံးရှိတဲ့ ဒီမိုကရေစီကွန်ယက်လို့ ပြောတာ ဖြစ်တယ်။
ဒု-ပင်လုံညိလာခံစင်ပြိုင်အာဏာယူဖို့မဟုတ်၊ စည်းလုံးရေးသာ ဦးတည်ဟု အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆို
အာဏာရှင်ကြီးများစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသွားမည်ဆိုသည်မှာ မြန်မာအဆိုတော်မိန်းကလေးများ၏အာဏာရှင်ကြီးများအကြိုက် သရုပ်ပျက်ဖော်ချွတ်ဝတ်ဆင်မှုကိုပါလားလို့
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း ပြုလုပ်သော တေးဂီတပွဲ၊ စင်တင်ပွဲများ၊ ၀တ်စားဆင်ယင်မှု ပြပွဲများတွင် မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုနှင့် မကိုက်ညီသော ၀တ်စားဆင်ယင်မှု မပြုလုပ်ရန် စည်းကမ်းချက်များ ထုတ်ပြန်ထားပြီး ယင်းကဲ့သို့ ပြုလုပ်လိုက်နာခြင်း ရှိ၊ မရှိကို စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဇာတ်ပွဲ ၊ Stage Show ပွဲများတွင် Fashion Show, Dancer Show များ ပါဝင်ခြင်းကို ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ဘဲ မြန်မာ့ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် မကိုက်ညီသော ၀တ်စားဆင်ယင်ခြင်းများ၊ သရုပ်ဆာင်ခြင်းများကို မပြုလုပ်ရန်လည်း စည်းကမ်းချက် ထုတ်ပြန်ထားသည်ဟု သိရသည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်၍ တေး ဂီတပွဲများ စီစဉ်သူတစ်ဦးက "အခုက ပွင့်လင်းရာသီရောက်ပြီ ဆိုတော့ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေကို မိုး တွင်းထက်ကို ပိုပြီးလုပ်လာကြပြီ။ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေ ပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာ စည်းကမ်းချက်တွေကို နည်းနည်း ထပ်တိုးထားတယ်လို့ သိရတယ်။ အဲဒီစည်းကမ်းချက်တွေမှာ ပျော်ပွဲ ရွှင်ပွဲတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာ မြန်မာ့ယဉ်ကျးမှုနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုတွေကိုပဲ ၀တ်ရမယ်။ သရုပ်ပျက်တွေ လက်မခံဘူးလို့ သိရတယ်။ အထူးသဖြင့် တေးဂီ တပွဲ၊ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုပြပွဲတွေမှာ အဲဒီလိုတွေမရှိအောင် ကြပ်မတ်သွားမယ်လို့ သိရတယ်" ဟု ပြောပြခဲ့သည်။
တေးဂီတပွဲများ၊ စင်တင်ပွဲ များ၊ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုပြပွဲများတွင် သရုပ်ပျက်စေသော ၀တ်စားဆင်ယင်မှုများ ရှိမရှိအား သက်ဆိုင်ရာက တာဝန်ပေးထားသော စောင့်ကြည့်အဖွဲ့မှ စောင့်ကြည့် သွားမည်ဖြစ်ပြီး လိုအပ်ပါက ဗီဒီယိုဖြင့် မှတ်တမ်းတင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး သရုပ်ပျက်ဝတ်စား ဆင်ယင်မှုများအားတွေ့ရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများထံသို့ ဆက်လက်တင်ပြကာ စည်းကမ်း ဥပဒေများနှင့်အညီ အရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်ရာတွင်လည်း ယင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ထားသော စည်းကမ်းချက်များကို ပွဲကျင်းပရေးအဖွဲ့တာဝန်ခံမှ တိကျစွာ လိုက်နာသွားရမည်ဟု သိရသည်။
ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများကျင်းပရာ တွင်ကျင်းပမည့် အကြောင်းအရာ အလိုက် သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနများ၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးမှသာ ကျင်းပခွင့်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး လောင်း ကစားဝိုင်း၊ အရက်၊ ဘီယာဆိုင်များ ဖွင့်လှစ်ခြင်းရောင်းချခြင်း မပြုလုပ်ရကြောင်း၊ ဆူပူခိုက်ရန် ဖြစ်ပွားခြင်းများ မရှိစေရေးအတွက် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့၍ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည် ဟုသိရသည်။
လုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်၍လည်း အထူးဂရုပြုသွားရမည်ဖြစ်ပြီး အများပြည်သူအား အနှောင့် အယှက်ဖြစ်စေသော အသံချဲ့စက်၊ Sound Boxများကို လိုအပ်သည်ထက် ကျယ်လောင်စွာ ဖွင့်လှစ်ခြင်းမပြုရန်လည်း စည်းကမ်း ချက် ထုတ်ပြန်ထားသည်ဟု သိရသည်ဟုnews-eleven ဂျာနယ် တွင် ဖော်ပြပါရှိပါသည်.။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Thursday, December 09, 2010 Links to this post
ထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တဦးမှ တောင်ယာအလုပ်သမားတဦးအား သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်
ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့ ဝါးစကင်းအနီးမှနောင်ဘို ရွာတောင်ယာလုပ်ငန်းခွင်၌ ယနေ့နံနက် ၉း၃၀အချိန်ခန့်တွင် ထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်မှ ၄င်း၏တောင်ယာတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားတဦးအား သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။
ဖြစ်ပွားပုံမှာ မဲဆောက်မြို့ ဝါးစကင်းအနီးမှ နောင်ဘိုရွာ ထိုင်းလူမျိုးပိုင် တောင်ယာလုပ်ငန်း ခွင်တွင် ပဲရိတ်သိမ်းနေသော မြဝတီမြို့မှ အလုပ်လာရောက်လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသည့် မြန်မာ ရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားတဦးအား သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပဲစိုက်ခင်းတွင် ပဲရိတ် သိမ်းလျှက်ရှိသော မြန်မာအလုပ်သမားများအချင်းချင်း စကားပြောရင်းအလုပ်လုပ်နေချိန် တွင် ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူမှ အလုပ်ကို မြန်မြန်လုပ်ရန်လာပြောရာ အလုပ်သမားများက ̏ လုပ်နေတာဘဲ˝ ဟုပြန်ပြောလိုက်ရာမှ ပိုင်ရှင်သူဌေးဖြစ်သူက သေနတ်ထုတ်၍ ပစ်ခတ် လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သေနတ်ပစ်ခံရသူနှင့်အတူ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသောအလုပ်သမား တဦးက ပြောသည်။
၄င်းလုပ်ငန်းခွင်မှ ပဲရိတ်သိမ်းလျှက်ရှိသော အလုပ်သမတဦးဖြစ်သူမှ ̏ကျမ တို့ အလုပ်ဆင်းချိန်က ၈နာရီပေါ့ အလုပ်သမားတွေအားလုံးပေါင်း ၅၈ယောက်ရှိပါတယ် ကျမတို့အလုပ်ဆင်းပြီး တနာရီကျော်ကျော်လောက်မှာ သူဌေးကအလုပ်ကိုကောင်းကောင်း လုပ် စကားမပြောနဲ့ မြန်မြန်လုပ်လို့လာပြောတယ် ကျမတို့ အားလုံးအဒေါ်(သေနတ်နှင့် အပစ်ခံရသူ)လည်းပါတာပေါ့။ အဒေါ်ကလုပ်နေတာဘဲလေလို့ပြန်ပြောလိုက်တာကို သူက သေနတ်ထုတ်ပြီးပစ်လိုက်တာဘဲ ဖြစ်ဖြစ်ချင်းတော့ကျမတို့ ထွက်ပြေးကြတယ် နောက်တော့ပြန်လာကြည့်တော့ အဒေါ်ရဲ့ခေါင်းကိုထိသွားတယ် သွေးတွေလဲအများကြီး ထွက်နေတယ် ပြီးတော့ဦးနှောက်တွေတောင်ထွက်နေတယ် ခဏနေတော့ ဘယ်က ကားလဲတော့မသိဘူး ဆေးခန်းလိုက်ပို့ပေးမယ်ဆိုပြီးကားပေါ်တင်သွားတယ် အဒေါ်ယောင်္ကျားရယ် နောက်တယောက်ဘဲလိုက်ခိုင်းတယ် ကားပေါ်တင်ပြီးတော့ ခေါ်သွားပြီးမှ ရောင်ခြည်ဦးအလုပ်သမားအဖွဲ့ ကိုလှမ်း အကြောင်းကြားတာ˝ ဟုပြောသည်။
အဆိုပါ သေနတ်ပစ်ခံရသော အလုပ်သမားမှာ ဒေါ်ညို အသက်(၅၇)နှစ်ရှိသူဖြစ်ပြီး မြဝတီမြို့အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်တွင်နေထိုင်သူလဲဖြစ်ကြောင်း သူမက ဆက်ပြောသည်။
သူမ ဆက်ပြောသည်မှာ ̏ ဒီနေ့မနက်ဘဲ သူဌေးကပြောတယ် မနက်ဖြန်ဆို ကျမတို့ လုပ်အားခတွေရှင်းပေးတော့မှာပါလို့ ဒီနေ့ အဒေါ်အခုလိုဖြစ်တာအရမ်းဘဲ စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါတယ်။ ဒါကြောင့်ရောင်ခြည်ဦးအလုပ်သမားအဖွဲ့ကိုအကူအညီတောင်းတာပါ˝ ဟုပြောသည်။
၄င်း၏ပြောကြားချက်အရ ရောင်ခြည်ဦးအလုပ်သမားအဖွဲ့မှကျောင်းသားဆေးခန်းနှင့် မဲဆောက်ဆေးရုံကြီးတွင် လိုက်လံစုံစမ်းရာမတွေ့ ရှိသေးဘဲ ပျောက်ဆုံးနေကြောင်းနှင့် ယခုဖြစ်စဉ်သည် ရာဇဝတ်မှုဖြစ်သောကြောင့် ထိုင်းရဲများအားအကြောင်းကြားပြီး ဆက်လက် အရေးယူမှုများပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရောင်ခြည်ဦးရုံးမှ ဥပဒေရေးရာတာဝန်ရှိသူ ဦးမြင့်ဦးမှပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။
သတင်း ပေးပို့ ပေးသူ ..... နောင်နောင်(ရောင်ခြည်ဦး).။
မြဝတီမြို့တောင်ဖက် မိုင် ၅၀ လောက်အကွာက နအဖစစ်တပ် သိမ်းထားခဲ့တဲ့ ဝေါ်လေမြိုင်ရွာ တွင် ဒီကေဘီအေခွဲထွက်အဖွဲ့နဲ့ နအဖတပ်တွေ တိုက်ပွဲဖြစ်
မြဝတီမြို့တောင်ဖက် မိုင် ၅၀ လောက်အကွာက နအဖစစ်တပ် သိမ်းထားခဲ့တဲ့ ဝေါ်လေမြိုင်ရွာကို မနေ့ညတုံးက ဒီကေဘီအေခွဲထွက်အဖွဲ့နဲ့ နအဖတပ်တွေ တိုက်ပွဲဖြစ်လို့ ရွာသားတွေ ညအမှောင်ထဲမှာ ထိုင်းဖက်ကို ထွက်ပြေးလာရပါတယ်။
ဝေါ်လေမြိုင်ရွာဟာ ဒီကေဘီအေ ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွှေးရဲ့ ဌာနချုပ်ဟောင်းဖြစ်ပြီး နအဖအစိုးရတပ်တွေက ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်လက သိမ်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် ဝေါ်လေမြိုင်ရွာမှာနေထိုင်တဲ့ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ရွာသားတွေ ညအမှောင်ထဲမှာထိုင်းဖက်ကို ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်။
ထွက်ပြေးလာတဲ့ရွာသားတချို့က တိုက်ပွဲအခြေအနေကို ပြောပြရာမှာ ''အခုကျွန်မတို့ ဝေါ်လေမှာ ငပွေးနဲ့ဒီကေဘီအေနဲ့ ရွာထဲမှာပစ်ထည့်တာ အလုံးကြီး ၂ လုံးအိမ်ရှေ့ တည့်တည့်မှာကျတယ်။ ရှစ်နာရီထဲကပစ်နေတာ။ ဒုက္ခရောက်မှရောက်ပဲ'' လို့ ပြောပါတယ်။
ငပွေးဆိုတာက ကေအင်ယူကို နအဖတပ်နဲ့ မြန်မာဖက်ခြမ်းက ဒေသခံတချို့က ခေါ်တဲ့ အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကေဘီအေ ခွဲထွက်အဖွဲ့ဘက်ကနေ ကေအင်ယူအပြင် ABSDF တပ်လည်း ဝင်ကူတိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။
နောက်ထွက်ပြေးလာသူတစ်ဦးကလည်း ''လက်နက်ကြီးဟာ လွတ်ရုံပဲ၊ အခုအမိုးတို့ ပြေးလာတာ။ လက်နက်ကြီး၊ စက်လတ်၊ ကာဘိုင်သံကော။ ဆယ့် ခြောက်ကော၊ တိုက်ပွဲအကြီးအကျယ်ဖြစ်နေတယ်'' လို့ ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
အခုပြေးလာတဲ့စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွကေို ထိုင်းအာဏာပိုင်တွကေ မြန်မာဖက်မှာ တိုက်ပွဲမရှိတော့ဘူးဆိုပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်အတွင်းကပဲ ဝေါ်လေမြိုင်ရွာကို ပြန်ပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုတိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်နေတဲ့ အတွက် မြန်မာဖက်နယ်စပ်က ရွာသားတွေ ထိုင်းဖက်ကို ပြေးလာလိုက် ပြန်သွားလိုက် အကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်နေပါတယ်။
အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြမှုကြောင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ မနီလာသိန်း ထောင်ဝင်စာ ပိတ်ခံရ
သရက်ထောင်မှာ နှစ်ရှည် အကျဉ်းချခံထားရတဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသူ မနီလာသိန်းဟာ ထောင်တွင်းမှာ အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြနေတဲ့အတွက် မိသားစုနဲ့ တွေ့ဆုံခွင့် ပိတ်ပင်ထားပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်နေ့က ထောင်ဝင်စာ သွားအတွေ့မှာ ထောင်အာဏာပိုင်တွေက အခုလို ပြောလိုက်တာဖြစ်ပြီး ဘာကြောင့် အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြသလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းကိုတော့ မသိခဲ့ရဘူးလို့လည်း မိသားစုဝင်တွေက ပြောပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့ မသင်းသီရိက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက် တနင်္လာနေ့က မနီလာသိန်းရဲ့ ယောင်းမတော်စပ်သူ မသန္တာယုနဲ့အတူ ၃ နှစ်အရွယ် မနီလာသိန်းရဲ့ သမီးငယ်တို့ သရက်ထောင်မှာ ထောင်ဝင်စာ သွားတွေ့တော့ တွေ့ခွင့်မရ ဖြစ်ခဲ့ကြတာပါ။ သမီးငယ်လေး ပါတဲ့အတွက် ခေတ္တခဏ မိခင်နဲ့ တွေ့ခွင့်ပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့လည်း အာဏာပိုင်တွေက တွေ့ခွင့်မပေးခဲ့သလို ယူသွားတဲ့ အစားအစာတွေသာ ပေးထားခဲ့ရပြီး ဘာကြောင့် မနီလာသိန်း ထောင်တွင်းမှာ ဆန္ဒပြနေလဲ ဆိုတာ မေးမြန်းလို့ မရခဲ့ဘူးလို့ မသန္တာယုက ပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့သွားတော့ ထောင်ဝင်စာ ပိတ်တယ်တဲ့၊ အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြလို့တဲ့၊ အဲဒီလိုပြောတာပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အစားမစားဘူးပေါ့၊ အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြလို့ ပိတ်တယ်ပေါ့။ စားသောက်ဖို့ ယူသွားတဲ့ ပစ္စည်းတွေတော့ ပေးခဲ့ရတယ်။ လူတွေ့ခွင့် မရဘူး။ ကျနော်တို့က ကလေးလေးပါနေလို့ ၅ မိနစ်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ပေးတွေ့ပါဆိုတာ ဘယ်လိုမှ မရဘူး။ ကလေးနဲ့သွားတော့ မလွယ်ဘူးပေါ့။ အများအားဖြင့်တော့ ကျနော်တို့က ၂ လတခါ ဆိုပေမဲ့ တော်ရုံတန်ရုံတော့ မသွားဖြစ်ဘူးပေါ့။ အခု ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာတုန်းက တခေါက်သွားထားတယ်။ ဒီဇင်ဘာက အခုလို ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ အဆင်မပြေခဲ့ဘူးပေါ့။”
မနီလာသိန်းဟာ မျက်စိအတွက်နဲ့အတူ အမျိုးသမီးရောဂါတခု အတွက် ပုံမှန်ဆေးဝါးတွေ သောက်သုံးနေရသူ ဖြစ်တာမို့ မိသားစုတွေ အနေနဲ့ အခုလို ထောင်ဝင်စာ တွေ့ခွင့်မရတဲ့အပေါ် ကျန်းမာရေးအတွက် စိုးရိမ်မိတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
“မျက်လုံးက မျက်သားတက်နေတာ၊ အဲဒါရှိတယ်၊ ပြီးတော့ အမျိုးသမီးရောဂါ ဖြစ်နေတယ်။ အမျိုးသမီးရောဂါ ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ စိတ်ပူတယ်လေ။ အဲဒါတော့ ဆရာဝန်နဲ့ စောစောပြရင် ကောင်းတာပဲ။ အခုတော့ ဘာတွေမှန်း မသိဘူး ရောဂါတွေက အစုံဖြစ်နေတော့၊ ကိုယ်က သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ဖြစ်မှာ ကြောက်တာလေ။ ပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကတော့ ဆေးပို့လိုက်တယ်။ တခြားတော့ ဘာမှ မလုပ်ရသေးဘူး၊ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့။”
မနီလာသိန်းကို ထောင်ဝင်စာ ပုံမှန်သွားတွေ့နေတဲ့ ယောင်းမတော်စပ်သူ မသန္တာယု ပြောပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသူတဦးဖြစ်တဲ့ မနီလာသိန်းဟာ ၂၀၀၇ လောင်စာဆီနဲ့ ကုန်ဈေးနှုန်း ကျဆင်းရေး လှုပ်ရှားမှုမှာ ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူတဦး ဖြစ်သလို ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုဂျင်မီရဲ့ ဇနီးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို ၂၀၀၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လထဲ ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ဒီဇင်ဘာလထဲမှာ ထောင်ဒဏ် ၆၅ နှစ် ပြစ်ဒဏ်ချကာ သရက်ထောင်မှာ ချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရတာပါ။ အဲဒီအချိန်က ခင်ပွန်း ကိုဂျင်မီဟာလည်း နှစ်ရည်ထောင်ဒဏ်နဲ့ပဲ တောင်ကြီးထောင်ကို အပို့ခံရတဲ့ အချိန်မှာ သူတို့ ၂ ယောက်ရဲ့ သမီးကလေးဟာ ၄ လသား အရွယ်နဲ့ပဲ ကျန်ခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံတ၀န်းက အကျဉ်းထောင်တွေမှာ ချုပ်နှောင်ခံထားရတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေဟာ အကျဉ်းသားတွေရဲ့ ရပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးတွေကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ ချိုးဖောက်ခံနေရတာ ဖြစ်တယ်လို့ ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေစိုက် AAPPB နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့က ပြောပါတယ်။ လတ်တလော အတွင်းမှာကိုပဲ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား တချို့ကို ထောင်တွေ နေရာအမျိုးမျိုး ရွှေ့ပြောင်းမှုတွေ ကြုံနေရတယ်လို့ AAPPB အဖွဲ့က အတွင်းရေးမှူး ကိုတိတ်နိုင်က ပြောပါတယ်။
“ပြီးခဲ့တဲ့လက ဦးအုန်းသန်းဆိုရင် ခန္တီးထောင်ကနေ မန္တလေးထောင်၊ မန္တလေးထောင်ကနေ မြစ်ကြီးနား၊ မြစ်ကြီးနားကနေ ပူတာအို ပြောင်းတာရှိတယ်။ နောက်တခါ မစန္ဒာကို ပူတာအိုထောင် ပြောင်းသွားတာ ရှိတယ်။ နောက်တခါ ကိုထင်ကျော်ကို ပြောင်းသွားတာ ရှိတယ်။ အဲဒီလိုမျိုး ထောင်လှည့်တဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ တထောင်ပြီးတထောင် လိုက်ပြောင်းနေတဲ့ အခြေအနေမျိုး ရှိပါတယ်။
“အဲဒါက တကယ်ကို ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု တခုလို့ပဲ ကျနော်တို့ မြင်တယ်။ သူတို့သာမက အိမ်တွေက မိသားစုတွေပါ အတိဒုက္ခရောက်တဲ့ ကိစ္စမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တခါ ဖျာပုံထောင်မှာဆိုရင် ဦးရွှေမောင်က အခု ဒုတိယအကြိမ် မျက်စိကုသမှု ခံယူရတယ်။ မျက်စိ ပြန်ကောင်းလာဖို့အတွက် အခြေအနေ မကောင်းဘူးဆိုတာ ကျနော်တို့ သိရပါတယ်။ ဒါတွေက ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ကိစ္စတွေပါ။”
AAPPB အဖွဲ့က ကိုတိတ်နိုင် ပြောပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
တခါ မြစ်ကြီးနားထောင်က နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ် ချခံထားရတဲ့ နာမည်ကြီး ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ကိုဇာဂနာ ဆိုရင်လည်း သူ့ကို ထောင်ဝင်စာ ပုံမှန် သွားတွေ့နေတဲ့ ခယ်မဖြစ်သူကို တွေ့ဆုံခွင့် မပေးတော့ဘဲ နယ်မြေရပ်ခြားကို ရောက်နေတဲ့ မိသားစုဝင်တွေကိုပဲ ထောင်ဝင်စာ တွေ့ခွင့်ပေးမယ်လို့ အာဏာပိုင်တွေက သတ်မှတ်လိုက်တာမို့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၇ လကျော်လောက်ကတည်းက အစားအစာတွေကို လူကြုံနဲ့သာ ပို့နေရတဲ့ အခြေအနေမျိုးတွေလည်း ကြုံနေရပါတယ်။
အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အဖွဲ့ချုပ် ရုံးချုပ်မှာ ဘုရားသားတော် သံဃာတော်များအား အလှူပေး (ရုပ်သံ)
ယနေ့ မနက် အဖွဲ့ချုပ်ရုံးတွင် သံဃာတော်များနှင့် သီလရှင်များအား အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လှူဒါန်းနေသောသတင်းဓာတ်ပုံ
အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သံဃာတော်များကို သင်္ကန်းကပ်လှူနေစဉ်
ယနေ့ နံနက် ၈ နာရီခန့်ကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးရှေ့မှာ သံဃာတော်တစ်ပါးကို သင်္ကန်းတစုံစီ ကပ်လှူခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်အဖွဲ့ချုပ်ပါတီဝင်များက အင်္ဂါ အပတ်စဉ်နေ့တိုင်း အဖွဲ့ချုပ်ပါတီရုံးချုပ်ရှေ့တွင် အပါတ်စဉ် ဆွမ်းကပ်လှူဒါန်းနေသောသံဃာတော် ၇၈၅ ပါးကို သင်္ကန်းတစုံစီ ကပ်လှူမှူပြုလုပ်ပြီး သီလရှင် ၁၁၉ ပါးကိုလည်း တဘက်တထည်စီ လှူဒါန်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်.။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Wednesday, December 08, 2010 Links to this post
ဘဘ ဦးသုခ၏ သမိုင်းကို မြေမြုပ်ပစ်လိုက်ခြင်းလား … ?
၂၀၀၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၇) ရက်နေ့က ကျွန်တော် မေမြို့တွင် ကိုယ်တိုင်ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင်အဖြစ် ရိုက်ကူးနေသော “ဇာတ်ကြမ်း” DVD ဇာတ်ကားကို ရိုက်ကူးနေစဉ် ကျွန်တော်တို့ ၏ လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး၊ အနုပညာရေးတို့တွင် ရှေ့ဆောင်လမ်းပြဖြစ်သော ကျေးဇူးရှင် ဘဘ ဦးသုခ ဆုံးပါးသွားကြောင်း သိရှိရသည်။ ထို့ကြောင့် ထုတ်လုပ်သူနှင့် ရုပ်ရှင်အဖွဲ့သားများ၊ သရုပ်ဆောင်များ အား တောင်းပန်လျက် ဘဘ ဦးသုခ၏ ကျန်ရစ်သော ခန္ဓာအား သဂြိုလ်မည့်နေ့ရက်၊ ဂူသွင်းမည့် နေ့ရက် နံနက် အစောဆုံးလေယာဉ်ဖြင့် ရန်ကုန်မြို့သို့ လျင်မြန်သောခြေလှမ်းတို့နှင့် ပြန်လာကာ ဂူသွင်းသဂြိုလ်မှုပြုလုပ်ပြီး ညနေ လေယာဉ်ဖြင့် မိမိ၏ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းရှိရာသို့ လေးလံသော ခြေလှမ်းတို့ဖြင့် ပြန်သွားခဲ့ရသည်။
ဘဘ မှာခဲ့သည် ရှိသည်။
“မောင်ကျော်သူရေ … ကျော်သူနဲ့ သုခ ဆိုတာ ကက်ကင်း” တဲ့။
“ဒါဆိုရင် … ကျော်သူနဲ့ သချိုင်း ဆိုတာလဲ ကက်ကင်းပေါ့” ဟု ကျွန်တော် မေးမိသည်။
“ဟုတ်လိုက်လေ … မောင်ကျော်သူရေ။ အေး ! ဘဘ ဆုံးရင်လဲ။ မောင်ကျော်သူဘဲ စီစဉ် သဂြိုလ်ပေး” တဲ့။
ဘဘ ဦးသုခသည် နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင်၊ စာပေအနုပညာ၊ ရုပ်ရှင်အနုပညာ၊ ဂီတအနုပညာသည် တို့၏ လမ်းပြကြယ်ပင်ဖြစ်သည်။ ဘာသာသာသနာနှင့် ပတ်သက်၍ စွမ်းဆောင်နိုင်သော အင်အား တို့ဖြင့် စောင့်ရှောက်ခဲ့သော ပုဂ္ဂိုလ်ထူးကြီးပင် ဖြစ်တော့သည်။
ဘဘ ဦးသုခသည် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)အား စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သူ ဂုဏ်ထူးဆောင် နာယကကြီးလည်း ဖြစ်သည်။ ဘဘ ဦးသုခ၏ ကျေးဇူးတရားတို့ကြောင့် ဗမာပြည်သူပြည်သားတို့ “သေဆုံးသွားပါက သေသောသူသည်သုဿန်သို့ သက်သက်သာသာသွားနိုင်ခဲ့ပြီ” ဖြစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့သော ဗမာပြည်သူပြည်သားများအတွက် လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး၊ သာသနာရေး၊ အနုပညာရေး ကိစ္စရပ်များကို ရှေ့ဆောင်လမ်းပြပေးသော အဖိုးမဖြတ်နိုင်သည့် ဓူဝံကြယ်ကြီးတစ်စင်း ဖြစ်သူ ဘဘ ဦးသုခ၏ ကွယ်လွန်ခြင်း (၅) နှစ်ပြည့် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ (၇) ရက်နေ့တွင် ကျွန်တော်တို့ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ အသင်းသူ/သားများ၊ ဘဘ ဦးသုခအား ကြည်ညို လေးစားကြသော (၇) ရက်သားသမီးများမှ ရေဝေးသုဿန်ရှိ ဘဘ ဦးသုခ၏ အုတ်ဂူအား ရေဆေးကြောခြင်း၊ ခြုံပုတ်များ၊ မြက်ရိုင်းများကို ရှင်းလင်းခြင်း၊ ဆေးသုတ်ခြင်း၊ သံတိုင်များနှင့် ခေါင်မိုးတို့အား ပွတ်တိုက်ဆေးကြောခြင်း၊ ပန်းဆက်ကပ်ခြင်း၊ ဘဘ၏ အုတ်ဂူရှိ ဓါတ်ပုံကားချပ်သည် နေလောင်မှေးမှိန်နေ၍ အသစ်ပြုလုပ်ထားသော အဝေးရောက် ဗဂျီဆရာ မင်းကျော်ခိုင်ရဲ့ ရေးဆွဲ ပေးထားသော ဘဘ၏ ပုံတူ Sketch အား စတီးပြားပေါ်တွင် ထွင်းလုပ်ထားသော လက်ရာနှင့် လဲလှယ်တပ်ဆင်ခြင်း၊ မေတ္တာပို့သ ကန်တော့ကြ ခြင်းများကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ပြင် ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ၏ အုတ်ဂူသို့လည်း သွားရောက်၍ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း၊ ပန်းဆက်ကပ်ခြင်း စုပေါင်းမေတ္တာ ပို့အမျှပေးဝေခြင်းတို့ကိုလည်း ကုသိုလ်ဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။
ဤသို့ ကျေးဇူးဆပ်ကုသိုလ်ယူပွဲ ပြုလုပ်စဉ်အချိန်ပိုင်းအတွင်း ကျွန်တော်၏ အသိဥာဏ်ထဲသို့ မေးခွန်းများ ဖျတ်ကနဲ ပေါ်လာမိသည်။
ဘဘ၏ ကျေးဇူးတရားများမကင်းကြသော ရုပ်ရှင်အနုပညာရှင်များ၊ ရုပ်ရှင် အဖွဲ့အစည်းမှ အနုပညာရှင် နာမည်ခံသူများတို့သည် ဤသို့သော အချိန်ကာလတွင် မိမိတို့၏ အတ္တကိစ္စများသာ လုပ်ဆောင်နေကြသလော … ? လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတရားများ၏ ကွန်ယက်တွင် ဆို့နစ်မွန်းကြပ် နစ်မြုပ်နေကြပြီလား …? သေမှာကိုမေ့နေကြပြီလား … ? မေ့ချင်ယောင်ဆောင်နေကြပါသလား … ? ဟူသော မေးခွန်းများ ဖြစ်တော့သည်။ ကျွန်တော်တို့ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) အသင်းသူ/သား များအနေဖြင့် မေ့ပစ်၍ မရနိုင်ပါ။ မေ့ချင်ဟန်ဆောင်၍လည်း မရပါ။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဒီနေ့ ဒီအချိန် ဒီနေရာတွင် အမြဲတွေ့မြင်ကြရမည်ဖြစ်သည်။
နောက်တစ်ချက် … ဘဘ ဦးသုခ၏ ကျေးဇူးတရားများကို သတိတရ ဖော်ကျူးကြသော ဟောပြောပွဲများ၊ မဂ္ဂဇင်းများ၊ ဂျာနယ်များတွင် ဘဘ ဦးသုခ လမ်းညွှန်ချပြပေးခဲ့သော နာရေးကူညီမှု အသင်း(ရန်ကုန်)နှင့် ပတ်သက်၍ တစ်လုံးတပါဒမျှ မပါရှိခြင်းသည် ဘဘ ဦးသု၏ ဂုဏ်ပုဒ် ကျေးဇူး တရားများကို ဖော်ကျူးကြသော ရေးသားသူတို့အနေဖြင့် -
မဖော်ကျူးကြခြင်းလား … ?
မရေးသားကြခြင်းလား … ?
ဒါမှမဟုတ် ရေးခွင့်မရ၍လား … ?
ဘဘ ဦးသုခ၏ သမိုင်းကို ဖွက်ထားကြခြင်းလား … ?
အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းများမှ ရေးခွင့်ပိတ်ထားခြင်းလား … ? စသည့် အံ့သြကုန်
ဤတွင် ကျွန်တော်တို့ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ သေမည့်ရက်၊ ဘ၀တစ်ပါးသို့ ပြောင်းလဲမည့်ရက်သည် အစိုးမရချေ။ သေလျှင်မပြီးသေးပါ။ မသေခင် သင်ဘာတွေများ ပေးဆပ်ခဲ့ပြီးပြီလဲ ဟူ၍သာ ပြန်လည် မေးလိုက်ချင်ပါရဲ့။
ပေးပို့ ပေးသော ကိုကျော်သူ အားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.။ှ
မြန်မာ့လေကြောင်းလိုင်းပိုင် MA 60 လေယာဉ်သစ် ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့က ရန်ကုန်လေဆိပ်သို့ ဆင်းသက်စဉ် ပြေးလမ်းဘေးသို့ ချော်ကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း
မြန်မာ့လေကြောင်းလိုင်းပိုင် MA 60 လေယာဉ်သစ် ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့က ရန်ကုန်လေဆိပ်သို့ ဆင်းသက်စဉ် ပြေးလမ်းဘေးသို့ ချော်ကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
တရုတ်နိုင်ငံမှ အသစ်ဝယ်ယူခဲ့ပြီး ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် ပြည်တွင်းခရီးစဉ်များစတင်ပြေးဆွဲခဲ့သော MA 60 လေယာဉ်သည် ထားဝယ်လေဆိပ်မှ ထွက်ခွာလာပြီး ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ ဆင်းသက်စဉ် ယင်းသို့ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
"လေယာဉ်က လေဆိပ်ကို ဆင်းတုန်း ပြေးလမ်းပေါ်မှာ ဘရိတ်ဖမ်းလို့မမိတော့တဲ့အတွက် ပြေးလမ်းပေါ်ကနေ ညာဖက်ကိုကွေ့ပြီးပြေးလမ်းဘေးမှာရပ်လိုက်ရတာတဲ့။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုတွေ မရှိဘူးလို့တော့ ကြားတယ်။ နံနက် ၁၀ နာရီလောက်ကဖြစ်တာပါ" ဟု လေဆိပ်အသိုင်းအ၀ိုင်းနှင့်နီးစပ်သူတစ်ဦးက ပြောပြခဲ့သည်။
MA 60 လေယာဉ်များသည် တရုတ်နိုင်ငံမှ စက်တင်ဘာလတွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် ပြည်တွင်းခရီးစဉ်များကိုစတင်ပြေးဆွဲခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံမှ MA 60 လေယာဉ်သုံးစင်းဝယ်ယူခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါလေယာဉ်များတွင် ခရီးသည် ၅၂ ဦးလိုက်ပါစီးနင်းနိုင်ကြောင်း သိရသည်ဟု news-eleven. ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြပါရှိသည်.။
ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်ဖွဲ့ ၏ ပြောက်ကျား တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် နအဖ စစ်တပ်မှ ( ၆ )ဦးကျဆုံး ကာ ၄ဦး ထိခိုက်
ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်ရှိ မာနယ်ပလောနယ်မြေတ၀ိုက်တွင် ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်ဖွဲ့(KNLA)က နအဖ လှုပ်ရှားတပ်ဖွဲ့များအား နိုဝင်ဘာလ ၅ရက်နေ့မှ ယနေ့အထိ ၄ကြိမ် ပြောက်ကျားတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ နအဖဘက်က ၆ဦး ကျဆုံးပြီး ၄ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်ဟု ကေအဲန်အယ်လ်အေ တပ်မဟာ(၇)၏ သတင်းအရ သိရသည်။
မြန်မာ့အရေး အားပေးရန် အိန္ဒိယကို အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တိုက်တွန်း (ရုပ်သံ)
တိုင်းပြည်ရဲ့ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍငွေ တွေအား ထင်တိုင်းကြဲကြတော့မဲ့ အကျင့်ပျက်အာဏာရှင်မြေးအဘိုး (၂)ယောက်ရဲ့ သတင်း
မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချူပ်မှုးကြီးသန်းရွှေသည် မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ဘောလုံးအသင်းကို ဒေါ်လာ သန်း တစ်ထောင်(တစ်ဘီလီယံ) ဖြင့် ၀ယ်ယူဖို့ ၂၀၀၉ ဇန်န၀ါရီလတွင် စဉ်းစားခဲ့ကြောင်း ၀ိကီလိခ်မှကြောင်း ၀ိကီလီခ် မှပေါက်ကြားသော အမေရိကန်သံတမန် လျှို့ဝှက်သတင်းများတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေမြေး ဖိုးလပြည့်က မန်ချက်စတာကလပ် ရှယ်ယာများကို ၀ယ်ယူဖို့ အကြိမ်ကြိမ် ပူဆာခဲ့ကြောင်း လျှို့ဝှက်သတင်းကို ရန်ကုန်ရှိ အမေရိကန်သံရုံးမှ ၀ါရှင်တန်သို့ ပေးပို့ခဲ့သည်။
ဆိုင်ကလုန်း နာဂစ် ကို နှေးကွေးစွာဖြေရှင်းဖြင်းအပေါ် ကုလသမဂ္ဂမှ စိတ်ဆိုးဒေါ်သထွက်မှုများ ရှိနေချိန်တွင် မန်ချက်စတာ ဘောလုံးအသင်းအား ဒေါ်လာသန်းတစ်ထောင်ဖြင့် ၀ယ်ယူဖို့ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးသန်းရွှေကို ဖိုးလပြည့်မှ အတင်း အကျပ် ပူဆာနေခဲ့သည်။ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးက ဘောလုံးအသင်း ၀ယ်ယူလိုက်လျှင် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် နိုင်ငံရေး စီးပွားရေး ပြဿနာများကို စဉ်းစားခဲ့ကြောင်း အသေးစိတ် သတင်းပေးပို့မှုတွင် ဖော်ပြထားသည်။
နာဂစ်ဆိုင်ကလုံးမှာ ၂၀၀၈ ခုနှစ် မေလတွင် ဖြစ်ခဲ့ပြီး လူ ၁၄၀၀၀၀ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြေးအဖိုး မန်ချက်စတာ ၀ယ်ဖို့ စဉ်းစားခဲ့သည်မှာ ၂၀၀၉ ဇန်န၀ါရီလ အစောပိုင်းတွင် ဖြစ်သည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးက မန်ယူကို ၀င်ယူလိုက်လျှင် အစိုးရအတွက် ဝေဖန်မှုများဖြစ်ပေါ်ပြီး အဆိုးဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သောကြောင့်၊ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ အကုန်ကျခံပြီး မြန်မာ့ အမျိုးသားဘောလုံးကလပ်များ ဖန်တီးဖို့ အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ထိုအချိန် နာဂစ်မုန်းတိုင်းးဒဏ်မှ အသက်ရှင်ကျန်သူများမှာ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့၊ သောက်သုံးရေမဲ့ ဖြစ်နေချိန်ဖြစ်သည်။
ဖိုးလပြည့်ရဲ့ ပူဆာမှုကို အစားထိုးပေးဖို့ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးက မြန်မာဘောလုံးအသင်းများ ထူထောင်ရန်၊ ဘောလုံးကွင်းသစ်များ တည်ဆောက်ရန်၊ နိုင်ငံခြားကစားသမားများ ခေါ်ယူရန်အတွက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီး ရှစ်ဦးကို ငွေအလုံအလောက် ချပေးခဲ့သည်။ ထိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များမှာ တကယ့် ဘောလုံးကလပ်အသင်း ပိုင်ရှင်များ မဟုတ်ကြောင်း၊ ဘောလုံးသမားလစာ၊ အားကစားဝတ်စုံ၊ အသင်းကြော်ငြာ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခစတဲ့ ကုန်ကျမှုကို မိမိတို့ဖာသာ အကုန်ကျ ခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း အမိန့်ပေးပြောဆိုခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ထိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ရှစ်ဦးက မိမိတို့ တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်အသီးသီးတွင် ဒေါ်လာတစ်သန်းတန် ဘောလုံးကွင်းများ တည်ဆောက်ဖို့ သတင်းပေးပို့ချက်တွင် ပါရှိသည်။
မကွေးအသင်းမှာ တစ်လလျှင် လစာငွေ ဒေါ်လာ ၁၅၅၀၀၀ ကုန်ကျသည်။ ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင် ဆက်စပ်နေသော ကမ္ဘောဇ အသင်းမှာ ၂၀၀၉ ဘောလုံးရာသီအတွက် ဒေါ်လာ ၂သန်း ကုန်ကျခဲ့သည်။ ရန်ကုန်ယူနိုက်တက် ဘောလုံး အသင်းမှာ အာဖရိကမှ ကြေးစား ဘောလုံးသမား ၅ဦး၊ ဒယ်လ်တာ ယူနိုက်တက်မှာ အာဂျင်တီးနားမှ ဘောလုံးသမားများစွာ ခေါ်ယူ ခဲ့သည်။
အမေရိကန်သံရုံး ဖော်ပြချက်တွင် ‘ဒီလောက် ငွေကုန်ကြေးကျများတဲ့လုပ်ငန်းကို အကျိုးအမြတ်မရှိဘဲ ဘာကြောင့်လုပ်နေကြတာလဲ ဟုမေးသောအခါ၊ အားလုံးမှာ ရွေးချယ်စရာမရှိပါဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးကခိုင်းရင် အားလုံး စောဒက ပြန်တက်ခွင့်မရှိပါဘူး’ ဟု ဖြေကြားကြောင်း ပါရှိသည်။
ထိုစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများမှာ ဆောက်လုပ်ရေးကန်ထရိုက်များ၊ ကျောက်မျက်ရတနာနှင့် မိုင်းတွင်းများ၊ သွင်းကုန်လိုင်စင်များ ကို အစိုးရထံမှ ရရှိနေသူများဖြစ်သည်။ ၂၀၀၉ မေလတွင် စတင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ရှိ ကလပ်များပိုင်ရှင်များတွင် ဖိုးလပြည့်အား ကလပ်ဘောလုံးလုပ်ငန်း အသေးစိတ်အစီစဉ်ဆွဲပေးသူ ခေတ်ပျက်သူဌေး ဇော်ဇော် လည်းပါရှိသည်။ ဖော်ဖော်မှ ဖိုးလပြည့်အား သူတည်ထောင်ထားသော ကလပ်အသင်းတွင် လာရောက် ဆော့ကစားဖို့ ပြောဆိုသည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးသန်းရွှေက ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် ဝေဖန်မှုများနှင့် စီးပွားရေး လူမှုရေးပြဿနာများကို လမ်းကြောင်းလွှဲဖို့လည်း ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များက ပြောဆိုကြောင်း ဖော်ပြသည်။
မန်ယူအသင်း ၀ဘ်ဆိုဒ် ချက်ချင်းတုန့်ပြန်ချက်မှာ မြန်မာအာဏာပိုင်များက ၀ယ်ယူခဲ့လျှင်ပင် ရောင်းချမည်မဟုတ်ကြာင်း၊ ပရိတ်သတ်က အပြင်းအထန် ဆန့်ကျင်သွားကြမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မန်စီးတီးအသင်းလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲ မန်ယူအသင်း ကို အကျင့်ပျက်အာဏာရှင်များအား လုံးဝ ရှယ်ယာများခွဲဝေရောင်းချမည်မဟုတ်ကြောင်း ချက်ချင်းတုံ့ပြန်ဖော်ပြခဲ့သည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Tuesday, December 07, 2010 Links to this post
ဒီဇင်ဘာလ(၆)ရက်နေ့တွင်(၅၁)နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့သည့် ဆရာမကြီးဒေါက်တာစင်သီယာမောင်၏မွေးနေ့မင်္ဂလာရက်မြတ် အခမ်းအနားဓာတ်ပုံသတင်း
ကျွန်တော်တို့ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)ရှိ သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းတွင် လာရောက်ပြီး ကုသ ပြသကြသော မျက်စိဝေဒနာရှင်များကို စေတနာရှင် မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ၏ အကူအညီဖြင့် စစ်ဆေးစမ်းသပ်၍ ခွဲစိတ်မှုလိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာဆေးခန်း၊ ဆေးရုံများသို့ ပို့ဆောင်ခွဲစိတ် ကုသမှုများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ခွဲစိတ်ခန်း စရိတ်များကို သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းမှ အကုန်အကျခံ ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် … လူနာများအနေနှင့် သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းသို့ လာရောက်ပြသ ရသော လမ်းစရိတ်၊ ခွဲစိတ်ရမည်ဆိုပါက သက်ဆိုင်ရာဆေးခန်း ဆေးရုံများသို့ သွားရောက်ရသည့် လမ်းစရိတ်၊ စားစရိတ် စသဖြင့် အချိန်ကုန် ငွေကုန် လူပန်းဖြစ်နေရသည်။
ထို့ကြောင့် ဤကဲ့သို့ မလိုလားအပ်သော ကုန်ဆုံးမှုများ မဖြစ်ပေါ်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ယခု ကျွန်တော်တို့သည် သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းတွင် “မျက်စိခွဲစိတ် ကုသခန်း” ကို ဖွင့်လှစ်ရန် ကြိုးပမ်း လိုက်တော့သည်။ထိုသို့ ကြိုးပမ်းမှုတွင် အလှူငွေများ လိုအပ်လျှက်ရှိသည်။
ကျွန်တော်တို့သည် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ အလှူငွေများရှိသော်ငြားလည်း ယခု ဈာပန အဆောက်အဦး တည်ဆောက်ရာ၌ များစွာကုန်ကျလျှက်ရှိသည်။ ဈာပန အဆောက်အဦးတွင် ရုံးခန်း၊ ဈာပနာလမ်းကြောင်း လက်ခံခြင်းရုံးခန်း၊ စာကြည့်တိုက်၊ ပညာဒါန (ဘာသာရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး) စသည့် စာသင်ခန်းများ လူသားများအတွက် အကျိုးပြုစေမည့် အကျိုးရှိစေမည့် လုပ်ငန်း စဉ်များပါဝင်သည်။
ထို့ကြောင့် ယခု လက်ရှိ သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း အဆောက်အဦးတွင် အခမဲ့ ဆေးဝါးကုသမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များသာ တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်တော့မည် ဖြစ်ပါသည်။
ယင်း အဆောက်အဦးတွင် “မျက်စိခွဲစိတ်ခန်း” အခန်း ပြုပြင်တည်ဆောက်တော့မည် ဖြစ်ပါသည်။ ဤတွင် ခွဲစိတ်ခန်းသုံး အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ ၀ယ်ယူရမည့်အကြောင်း ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။
ယင်း ပစ္စည်းစာရင်းမှာ -
 Kerato Refractometer 10025 US $ (လက်ရှိပေါက်ဈေး)
 Biometry Machine 7698 US $ (လက်ရှိပေါက်ဈေး)
 OT Table (EYE) 4480 US $ (လက်ရှိပေါက်ဈေး)
 Surgeon Chair 101 US $ (လက်ရှိပေါက်ဈေး)
 Spot Light 2439 US $ (လက်ရှိပေါက်ဈေး)
 Cataract Surgical Set (4 - Set) 1724 US $ (လက်ရှိပေါက်ဈေး)
 Eye Minor Surgical Set (4 - Set) 1752 US $ (လက်ရှိပေါက်ဈေး)
 Operatin Microscope (Motorized) 12348 US $ (လက်ရှိပေါက်ဈေး)
ယင်းပစ္စည်းများအနက် Digital Slit Lamp နှင့် Operatin Microscope (Motorized) တို့အား အလှူရှင် ကိုဝင်းထွန်း + မပေါက် (သိဂီရွှေဝါပိုးထည်) က ၀ယ်ယူလှူဒါန်းပြီးဖြစ်ပါသည်။ ကျန်ရှိနေ သော ပစ္စည်းများအတွက် အလှူငွေ 28219 US$ ခန့် လိုအပ်လျှက်ရှိပါသည်။
ထို့ကြောင့် လူသားတို့၏ စက္ခုအမြင် ကြည်လင်ပြတ်သားရန်၊ စူးရှထက်မြက်လာရန်၊ အေးမြ တောက်ပလာရန်အတွက် လျင်မြန်စွာ ကုသိုလ်ဖြစ် အခမဲ့ ခွဲစိတ်ကုသပေးလိုပါသဖြင့် အမြန်ဆုံး အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် တက်အားသ၍ လျင်မြန်စောလျှင်စွာ ကုသိုလ်ယူကြပါရန် နှိုးဆော်လိုက် ရပါသည်။
ပြည်တွင်း/ပ ရှိ မြန်မာလူမျိုးများအနေဖြင့်လည်း တစ်ဦးလျှင် 10 US$ (တစ်ဆယ်ဒေါ်လာ) လှူဒါန်းကြပါက လူအယောက် (၂၅၀၀) ဦး ဆိုပါက လိုအပ်သော မျက်စိခွဲစိတ်ခန်းသုံး ကရိယာပစ္စည်း များ ၀ယ်ယူနိုင်ပါတော့မည်ဖြစ်ပါကြောင်း … ထို့ကြောင့် တစ်ဦးလျှင် တစ်ဆယ်ဒေါ်လာ လူ ၂၅၀၀ ဆိုလျှင် ဗမာတွေ အလင်းပွင့်တော့မည် ဖြစ်ပါသည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Monday, December 06, 2010 Links to this post
Monthly Chronology of Burma's Political Prisoners for November, 2010.
Monthly Chronology of Burma's Political Prisoners for November, 2010
( ၉၀ ) နှစ်မြောက်အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ အခမ်းအနား နှင့် မှတ်တိုင်စာကြည့်တိုက် ဖွင့်လှစ်ခြင်း အခမ်းအနား ( ကိုရီးယား )
Posted by ဒီမိုဝေယံ at Monday, December 06, 2010 Links to this post
ပြည်တွင်း အင်တာနက်သုံးသူတို့အတွက် အထူးသတင်း
အင်တာနက်သုံးသူတို့အတွက် အထူး သတင်း on ♥ မြန်မာချစ်သူများ ♥မြန်မာပြည်တွင်းက အချို့သော ဆိုင်ဘာကဖီး(သို့) အင်တာနက်ဆိုင်များမှာ key-logger ဟုခေါ်သည့်ဆော့ဖ်ဝဲများ ထည့်သွင်းထားပြီး လာရောက် သုံးစွဲနေသူတွေအထဲမှာမှ နိုင်ငံရေးနှင့်ပတ်သက်၍ပြည်တွင်း ပြည်ပဆက်သွယ်နေကြတဲ့ ပြည်တွင်းမှတတ်ကြွလှုပ်ရှားသူများအားခြေရာခံ နိုင်အောင် လုပ်ဆောင်နေမှုများ ရှိနေပြီး ထိုကဲ့သို့တတ်ကြွလှုပ်ရှားသူများအား ဖမ်းဆီးမိနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ထားတာတွေရှိနေပါသည်။
keylogger ဆိုသည်မှာ window စတက် စဉ်ကတည်းက စအလုပ်လုပ်နေပါသည်။ ပိတ်လိုက်လည်း နောက်ကွယ်မှာ လုပ်နေဆဲဖြစ်ပါသည်။ tray icon လည်းပေါ်နေခြင်းမရှိ၍ငှင်းအလုပ်လုပ်နေမှန်း မသိနိုင်တော့ပါ။ ၄င်းမှမိမိ keyboard တွင်ရေးလိုက်သမျှ၊ mouse နဲ့နှိပ်လိုက်သမျှများ အားလုံးအား အချိန်နဲ့တကွ မှတ်ထားပေးနေပါသည် .. ။ ထိုအခါ မိမိတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်သက်ဆိုင်သမျှ အားလုံးအား ငှင်းဆော့ဖ်ဝဲမှ မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်နေ၍ လုံခြုံမှုလုံးဝမရှိနိုင်တော့ပါ။ (All in 1 key-logger သာဆိုပါလျှင် ဓါတ်ပုံများ၊ အသံများနှင့် ဗီဒီယိုများ အစရှိသဖြင့်အစစအရာရာအားအတိအကျပင် ၄င်းကမှတ်သားထားပေးနိုင်တဲ့ဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်ပါသည်။)
ထိုကဲ့သို့သောဆော့ဖ်ဝဲမျိုးအား ကွန်ပျူတာတွင်သွင်းထားပြီး လာရောက်သုံးစွဲသည့်သူ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များအားအတိအကျ ထောက်လှမ်းထား နိုင်၍ မိမိတို့အနေဖြင့် ဆိုင်ဘာကဖီးသို့မဟုတ်တစ်ပါးသူ၏ ကွန်ပျူတာအားသုံးစွဲတော့မည်ဆိုပါက မိမိသုံးစွဲမည့် ကွန်ပျူတာထဲတွင် ငှင်းဆော့ဖ်ဝဲအား ရှိမရှိ အရင်ဆုံးစစ်ဆေးကြည့်ဖို့အတွက် အလေ့အကျင့်လုပ်ထားပါက အကောင်းဆုံးနှင့်လုံခြုံမှု အနည်းငယ် ပိုမို၍ရှိသွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။ မိမိတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက် အလက်များအား သူတစ်ပါးဆီပါမသွားနိုင်အောင်လုပ်ရမည့်နည်းလမ်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ .
ပထမဦးစွာ Ctrl+Shift+Esc(or)Ctrl+Alt+Del နဲ့ Task manager ကို ခေါ်လိုက်ပါ ..။ Task manager ၀င်းဒိုးတက်လာပါက Process ဆိုတဲ့ tab ကို နှိပ်ပြီး msdts.exe ဆိုတာကို လိုက်ရှာကြည့် ပါ ။ ရှိနေခဲ့လျှင်ထိုကွန်ပျူတာတွင် keylogger အသုံးပြုထားပြီဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့တွေ့ရှိပြီဆိုလျှင်ငှင်းဖိုင်လ်အား End process ပေးလိုက်ရန်လိုအပ်ပါသည် ။
ထိုသို့ end process လုပ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်ငှင်းလုပ် ဆောင်နေသည့်လုပ်ငန်းတွေအားလုံး ပြီးဆုံးသွားပြီး မိမိလုပ်ကိုင်နေသည်များ ကိုလဲမှတ်ထားတော့မည် မဟုတ်တော့ပါ။ Task Manager ကို အထက်ပါအတိုင်း ကီးသုံးခုနှိပ်တာအပြင် window logo+R နှိတ်ပြီးတတ်လာတဲ့ Run box မှာ taskmgr လို့ရေးပြီး ခေါ်ယူလဲရပ်ါသည်။ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာtask manager မှာရှိနေသော process tab ထဲမှာရှိနေတဲ့ကောင်တွေထဲကကိုယ်သုံးမယ့် gtalk လောက်ပဲအိုကေထားပြီး ကျန်တာတွေကို disable သို့မဟုတ် end process ပေးလိုက်ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ရိုးရိုးယူဆာတွေအနေနှင့် ဘယ်လိုဖိုင်အမျိုးအစားက အချက်အလက်တွေကို ရီကော့လုပ်တာလဲဆိုခြင်းကို မသိနိုင်၍အန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်း ၄င်း process tab ထဲတွင်ရှိသမျှဖိုင်လ်များအားလုံးအား end process လုပ်ပြီးမိမိအသုံးပြုမည့်ဖိုင်လ်ကိုပဲ manually ခေါ်သုံးတာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ task manager ကိုခေါ်လို့မရခဲ့ပဲ admin အခွှင့်အရေးရှိမှရမည် ဆိုလျှင်တော့ ထိုသို့သော အင်တာနက်ကဖီးမျိုးကို ရှောင်ဖို့သင့်ပါသည်။ စိတ်ချရသည့် နည်းပညာပိုင်း အားနည်းသောအင်တာနက်ဆိုင်ကိုသာ သွားရောက်အသုံးပြုစေချင်ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် နည်းပညာအရ အဆင့်အတန်းငှင်းဆိုင်တွင် အသင့်အတင့်မြင့်နေပြီဖြစ်၍ တော်ရုံမဟုတ်တော့ဘူးဟူ၍ ယူဆလို့ရနိုင်နေပါသည်။ ပြီးနောက် keyloggerတွေထဲမှာပင် လျှင် အွန်လိုင်းဝဘ်ပေ့ဂ်ျမှာတင်လို့ရသည့် keyloggerနှင့်hardware keyloggerဆိုပြီးရှိနေပါသေးသည်။ ငှင်းတို့အားသုံးစွဲထားသည့် ကွန်ပျုတာမှဆိုလျှင် taskmanager ခေါ်ပြီး end process ပေးလိုက်လျှင်တောင်မရနိုင်တော့ပါ။
ထို့အတွက် အများကြီး သတိထားနိုင်ကာမှ တော်ကာကျမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုပို့စ်လေးကို ရေးပြီးမိတ်ဆွေတို့အားလုံးကို ပို့ရတဲ့အကြောင်းရင်းမှ့ာပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ရက်ကပဲ ကျွန်တော့်ကိုပြည်တွင်းမှတတ်ကြွလှုပ်ရှားနေသူ မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်မှနေ၍ ရန်ကုန်ုမြို့တာမွေမြို့နယ် ကျောက်မြောင်းအရပ်တွင် ရှိသော အင်တာနက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်တင် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတစ်ယောက် ပြည်ပနှင့် အဆက်အသွယ်လုပ်နေကြောင်း တွေ့ရှိရ၍ဆိုကာ အထောက်အထားနှင့်တကွ အဖမ်းခံရတယ်ဟုပြောပြခဲ့၍ အခြားသောပြည်တွင်းမှ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ အနှေနှင့်နည်းပညာပိုင်း အရ ရှောင်လွှဲလို့ရနိုင် တဲ့အချက်လေးတစ်ချက်အဖြစ်နဲ့ တစ်ဘက်တစ်လမ်းကနေ အထောက်အကူ ဖြစ်စေချင်လို့ပဲ ဖြစ်ပါသည်။
မေးလ်ထဲကို ပေးပို့ လာလို့ ပြန်လည် မျှဝေလိုက်ပါတယ်ရှင်..
အိန္ဒိယ လူမှုအဖွဲ့အစည်းက အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ဒီမိုကရေစီ ဧကရီဆု ချီးမြှင့်
မြန်မာနိုင်ငံ ၏ ခေတ်အဆက်ဆက် အကြွေ ဒင်္ဂါးစေ့ များနှင့် ငွေစက္ကူပိုက်ဆံ များ
ပြန်လည် မျှဝေ ပေးသော ကိုဒေါင်းမာန်ဟုန် အားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.။
ယနေ့ တောင်ဒဂုံရှိ HIV ဝေဒနာရှင်များ ဂေဟာသို့ ပြည်တွင်း ဂျာနယ်လစ်များ လာရောက် လှူဒါန်း(သတင်း၊ဓာတ်ပုံ).
အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ သားငယ် က...
ပြည်ပမှ ကျပ် ၃ သိန်းနှင့်အထက် ပစ္စည်းဝယ်ပါက ပစ္စည်းလ...
ယနေ့တွင်အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရေ...
ယနေ့ အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အေ...
အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အားမိသားစု...
မြန်မာနျူကလီယား တည်ဆောက်ရေး မြောက် ကိုရီယား ကူညီနေ...
ရန်ကုန်ရောက် အမေရိကန်အရာရှိ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ေ...
ထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တဦးမှ တောင်ယာအလုပ်သမားတဦးအားေ...
မြဝတီမြို့တောင်ဖက် မိုင် ၅၀ လောက်အကွာက နအဖစစ်တပ် သ...
အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြမှုကြောင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ မနီလာသိ...
အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အဖွဲ့ချုပ်...
ယနေ့ မနက် အဖွဲ့ချုပ်ရုံးတွင် သံဃာတော်များနှင့် သီလ...
ဘဘ ဦးသုခ၏ သမိုင်းကို မြေမြုပ်ပစ်လိုက်ခြင်းလား … ?...
မြန်မာ့လေကြောင်းလိုင်းပိုင် MA 60 လေယာဉ်သစ် ဒီဇင်ဘ...
ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်ဖွဲ့ ၏ ပြောက်ကျား တ...
မြန်မာ့အရေး အားပေးရန် အိန္ဒိယကို အမျိုးသားခေါင်းဆော...
တိုင်းပြည်ရဲ့ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍငွေ တွေအား ထင်တိုင်းကြဲကြတေ...
( ၉၀ ) နှစ်မြောက်အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ အခမ်းအနား နှ...
အိန္ဒိယ လူမှုအဖွဲ့အစည်းက အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဒေါ်အော...
မြန်မာနိုင်ငံ ၏ ခေတ်အဆက်ဆက် အကြွေ ဒင်္ဂါးစေ့ များနှင...
ကျောင်းသားတွေကို ဘဝတက္ကသိုလ် ရောက်အောင် မတရားပို့ခဲ...